That's so good, right?: March 2011
ကျွန်တော်က ရုပ်ချောပြီး အလန်းဇယားပုံစံကောင်လေးမဟုတ်ရပါ။ ကျွန်တော့်အရပ်က ၆ပေ ၂လက်မရှိပြီး သာမန်ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်ပါပဲ။ ကျွန်တော် ချွဲတဲတဲ စကားလုံးမသုံးတတ်သလို မပီကလာပီကလာလည်း မပြောတတ်ပါ။ ကျွန်တော့်အသက်က ၁၉နှစ်ရှိပေမဲ့ ၂၅နှစ်ရုပ် ထွက်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်လိင်တူခြင်းကိုကြိုက်သဗျ။ အမြဲတမ်းကြိုက်မယ်ထင်တာပဲ။ ကျွန်တော့်အိပ်ခန်းထဲမှာ ကျောင်းက အတန်းဖော်ငနဲနှင့် တစ်နာရီလောက် အချိန်ဖြုန်းမိခဲ့တဲ့ နည်းနည်းငယ်တုန်းကတည်းက စကြိုက်မိခဲ့တာ။ ဦးလေးဟိုတယ်ကို အလည် သွားတော့ ခပ်ထွားထွား ၀န်ထမ်းငနဲတစ်ယောက် ကျွန်တော်အိပ်နေတဲ့အခန်းကိုလာခဲ့ပြီး တော်တော် ကောင်းတဲ့ နာရီဝက်စာ ကောင်းကင်ဘုံခေါ် သွားတဲ့အခါမှာ ပိုမိုသေချာသွားတယ်။
ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်ကောင်းတစ်ခုကို တက်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က တော်တတ်တဲ့ ကောင်းသားတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး မှတ်တမ်းများအရပေါ့။ ဒီတက္ကသိုလ်က သောက်ငနဲတွေကို ကြည့်ရတာ လက်ကြောတင်းမယ့်ပုံစံတွေ ယုံကြည်စိတ်ချရမယ့်ပုံတွေ တစ်ယောက်မှကိုမရှိဘူး။ ကျောင်းချိန်ပြီးရင် Sea Men မှာ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထုပ်ပိုးပြီး Truck ကားတွေ ဆီပို့ပေးရတဲ့ အလုပ်လေ။ ညဆိုရင်တော့ ကလပ်သွားပြီး ရှာဖွေခရီးလုပ်ရတာပေါ့ ကံကောင်းလိုကံကောင်းငြား။ ပြီးရင်တော့ တစ်ယောက်တည်းနေ ဖြစ်ရတဲ့ တိုက်ခန်းစီပြန်ခဲ့တယ်။
တကယ်လို့ ကံကောင်းခဲ့ရင်လည်း များသောအားဖြင့် လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တစ်ယောက်လောက်ပဲရတယ်။ ဒါလည်း အိုကေတာပါပဲလေ သူ့ပစ္စည်းက မာပြီး အလုပ်ဖြစ်ရင် ပြီးတာပဲမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်က အဲဒါကိုပဲ ပိုကြိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူကြီးလူကောင်းပုံ suits နဲ့ လူတွေကိုမုန်းတယ်။ သူတို့အလိုကို ကိုယ်တွေလိုလူက အလိုက်တသိပဲ လိုက်လျောပေးရမယ့်ပုံစံ သူတို့ဘက်ကတော့ နေတဲ့နေရာ ကိုပြန်ပို့ပေးရုံကလွဲလို့ဘာမှမရှိ။ အထူးသဖြင့် ဘိုးတော်တစ်ယောက်အကြောင်း ပြောပြချင်သေးတယ်။
အသက် ၃၀၀န်းကျင် စတိုင်လ်မိမိနှင့် အတော်ကြည့်ကောင်းတဲ့လူ။ သူက ကျွန်တော်တို့နှင့် ကျွန်တော့သူဋ္ဌေးဂိုထောင်မှာ စားဝိုင်းပေး တာများ မောက်မောက်မာမာနှင့် ပုံစက။ ၀တ်ထားတဲ့ အနီရောင် နက်ခ်တိုင်ကလည်း ကြည့်ရတာဆိုးတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမှာတော့ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကို Cross ပဲ။ ဒီညအတွက် ကျွန်တော်တွေးထားတာက အပြင်ထွက်သောက်မယ် တစ်ခုခု၊ ကြုံစုံလာတဲ့ ဘဲတစ်ပွေ လောက်ဖန် ပြီး လှပထွားကြိုင်းတဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို အလုပ်တစ်ခုပေးရတာပေါ့။ ကျွန်တော်က အရပ်မြင့်ပေမဲ့ ပေါင်တံတွေ တင်ပါးဆုံတွေက ထူးထူးခြားခြားလှပပါတယ်။ ဆီးစပ်တို့ ရွှေဥအောက်တို့ ပြောရရင် ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ဝိုက်မှာ ရှိတဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေ ကို ရိတ်ရတာကြိုက် တယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲကို ပိုကြီးတယ်လို့ထင်ရစေသလို တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို အဲဒီလိုလုပ်ထားမှ ပိုပြည့်စုံ တယ်လို့ ခံစားရတာမို့ ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်နှင့် အိပ်ယာခန်းဝင်ရင်လည်း သူတို့ ရှေ့လှန်ပြရတာ ပိုကောင်းသပေါ့နော်။
အိမ်ကိုပြန် ရေကိုအသေအချာချိုး ဘားကိုသွားဖို့ အ၀တ်လဲပါတယ်။ ခပ်လန်းလန်းအ၀တ်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူး ဂျင်းဘောင်းဘီတစ် ထည်နှင့် ဘော်ဒီဆိုဒ် တီရှပ်တစ်ထည်လောက်ပါပဲ နဲနဲသိသာတဲ့ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းကိုပြဖို့။ အဲဒီနို့သီးခေါင်းတွေက ကျွန်တော့် ခံစားမှုအဟုန်ကို မြင့်စေသောအရာပါ။ ကြိုက်တယ် သူတို့ကို ပွတ်သပ်နှိုးဆွရတာ။ သူတို့တွေကို တစ်စုံတစ်ယောက်က နှုတ်ခမ်းလေး တွေနှင့် ညှပ် လျှာနဲ့ကလိရုံဖြင့် ကျွန်တော့်ငပဲကို သံချောင်းလို မာစေရော။ ဟူး.... ဘားထဲဝင်သွားလိုက်တာ တော်တော်ဆူညံနေတာပဲ။ ကျွန်တော် မျက်စိကျမိတယ် လူကြီးနှစ်ယောက်ကို။ သူတို့ကိုကြည့်ရတာ ဖီးလ်မလာပါဘူး။ ထပ်ရှာဦးမှပါ သူတို့ထက်ပိုအိုကေတာ။ ခွေးမသားတစ်ယောက်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါပြီ။ ကျွန်တော်သိခဲ့ဖူးတဲ့ ငနဲတစ်ပွေဆိုတာ သေချာပါတယ်။ Golf Shirt တစ်ထည် ၀တ်ထား တာပါ။ အားလုံး လိုလို ပန်းရောင်လွှမ်းနေသလိုပါပဲ။ ဘောင်းဘီကတော့ ကာကီအရောင်နု။ ဆံပင်တွေကို ပုံစံအမိုက်စားပြင်ထားတာ။ ဖန်ခွက်လှလှကို လက်မှာညှပ်ထားပြီး ဟိုလူနဲ့စကားပြောလိုက် ဒီလူနဲ့သွားပြီး စကားဆိုလိုက် သူ့ကိုယ်သူ အလုပ်များနေတဲ့ ပျားတစ် ကောင်လိုပဲ။ အနား နားတိုးကပ်ပြီးသေချာအောင် ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်။ သေချာတာပေါ့သူပဲ။ နောက်ပြန်ဆုတ်ကာ ကျွန်တော့် ရွေးချယ်မှုကို ပြောင်း လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ရယ်မောမိပါရဲ့ သူ့ဘော်ဒါတွေက ဘယ်လိုအကျင့်မျိုးဖြစ်တဲ့ အခြောက်တစ်ယောက်ဆိုတာ သိသွားရင် သူ့ကိုဘယ်လိုများ။ နည်းနည်းလေးတော့ သူ့ကိုကလိဦးမှပါ။
သူ မသိဘူး ကျွန်တော်က ကျော်ကျော်တို့စီကဆိုတာ။ ပြီးတော့ သူကျွန်တော့်ကို လုံးဝမမှတ်မိ။ ဘယ်လို လူမျိုးကိုသူရှာနေလဲ ကျွန်တော် မပြောနိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ မိနည်အနည်းငယ်လောက် စကားပြောကြည့်လိုက်တာနဲ့ အဲဒါကိုကျွန်တော်ပြောနိုင်မှာ။ ကျွန်တော် ကစားပွဲတစ်ခု စတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူ့နားတိုးကပ်သွားကာ ဘေးတိုက်ရွေ့ရင်း မသိမသာတွန်းတိုက်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ဘက်ကို ခေါင်း လှည့်လာပါရော။ ကျွန်တော် သူ့ကိုတောင်းပန်တဲ့ အနေနဲ့ တစ်ခုခုဝယ်တိုက်မယ်ဆိုပြီး လုပ်ရပါတယ်။ ဒီလူစကားတုန့်ပြန် ပြောဆိုနေပုံ က ဧရာမကြီးပုံစံနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုလုပ်ချလိုက်တာ။
ဇော်ကို, ဟုတ်တယ် သူ့နာမည်ပါ။ သူက ကျွန်တော့်ကို အရိုင်းအစိုင်းကောင်ကို ကြည့်သလိုကြည့်တယ်။ 'တော်တော်ရိုင်းတဲ့လူ' သူ martini တစ်ခွက်မှာတယ် ဈေးအကြီးဆုံး ယမကာပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခွက်ယူလိုက်ကာ ငွေချေလိုက်ပါရဲ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့ စကားဆိုကြတာပေါ့နော်။ သူက ခပ်မာမာ၊ မောက်မာစွာ၊ အားပြင်းပြင်း စကားဆိုပါတယ်။ ထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးနိုင်သူ ထိပ်ဆုံးတွေ အားလုံးရဲ့ထိပ် ပုံစံမျိုးချိုးနေတယ်ဆိုတာ ချက်ခြင်း ကျွန်တော်သဘောပေါက်မိရပါတယ်လေ။ အရပ် ၆ပေ၂လက်မရှိပြီး ကြွက်သားများ နှင့် ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းသူဖြစ်ပေမဲ့ ပျော့ညံ့သူတစ်ယောက်အသွင် ကျွန်တော် သရုပ်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအရ သဘောကျသွားပုံတော့ရရဲ့။ တခြားသူတွေနှင့် ကျွန်တော့်ကို မိတ်ဆက်စကားဆိုနေပုံက 'အိမ်မွေးတိရစ္ထာန်အသစ်လေး တွေ့ထားတယ် ကြည့်ကြပါဦး' ပုံစံမျိုးလေ။ ကျွန်တော့်ကို ချိုးနှိမ်နေတာ မှန်ပေမဲ့ အေးအေးသက်သာပဲ နေလိုက်ပါတယ်။ သူ တခြား သူတွေရှေ့မှာ ကျွန်တော့်ကို ပွတ်သပ်သလို သူ့ဟာကိုလည်း ပွတ်သပ်စေရော။ ခပ်မိုက်မိုက် ၀တ်စုံနှင့် ပစ္စည်းကောင်းပိုင်ရှင် ငနဲပေါ့လေ သူက။
ည ၁၁း၀၀ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော့ ဒီညအတွက် သူ့ကစားစရာအဖြစ် ကျွန်တော့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကာ 'ငါနဲ့လိုက်ခဲ့' တဲ့ သူကပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ခွေးပေါက်စလေးတစ်ကောင် သူ့သခင်အမိန့်အတိုင်းနောက်က တန်းကနဲပါသလို လိုက်သွား တာပေါ့။ သူ့ကားကြီးက မနာလိုစရာကောင်းလိုက်တာ ကြီးလေ။ သူ့နေရာကို ကားမောင်းသွားတုန်း သူ့ငပဲကိုမှုတ်ပေးဖို့ ကျွန်တော့်ကို အမိန့်ပေးတယ်။ သူ့ဘောင်းဘီကိုဖွင့် ငပဲကိုအပြင်ထုတ်လိုက်ကာ မြင်ဖူးသမျှထဲမှာတော့ အကြီးဆုံးပဲ။ အလွယ်လေး ၇လက်မလောက် ရှိတယ်။ ဒါတောင် အပြည့်အ၀ မမာသေးဘူး။ ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားပြီး ဆီးခုံမွှေးတွေ ရိတ်ထားတာပါ။ သူ့ရုပ်ရည်နှင့်ဆို ဘယ်သူမှ တွေးမယ်မထင် ဒီလောက်ကြီးမယ်လို့။ ကျွန်တော် သူကားမောင်းနေစဉ် ကောင်းကောင်းပြုစုပေးခဲ့ပါတယ် ငပဲကို။ သူနေထိုင်တဲ့ အိမ်ကြီး ကလည်း ကျယ်တယ်လေ။ မောင်းဝင်လာတဲ့ ကားအပြင် ရပ်ထားတာက Porsche နှင့် Lexus ကားတွေ။ သူ့နောက်ကနေ အိမ်မကြီးထဲ ကျွန်တော်လိုက် သွားရတယ်။ 'မင်းရေအရင်ချိုးဖို့လိုမယ်။ ပြီးရင် ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကို သန့်စင်ပေး' ကျွန်တော့်ကို အပေါ်ထပ်က အိပ်ခန်း တစ်ခန်းစာထက် ကျယ်တဲ့ ရေချိုးခန်းကို ခေါ်သွားပါတယ်။ အိုး...သူ အတော် စည်းစိမ်ခံတတ်သူပါလား။ ရေချိုးခန်းနှင့် အိပ်ခန်းတစ်ခန်း ပေါင်းလိုက်ရင် ကျွန်တော်နေတဲ့ တိုက်ခန်းထက်တောင်ကျယ်မယ်။
သူက တကယ့်ကို လှပပြေပျစ်သူပဲ။ မပိန်မပါး ကျစ်လစ်တဲံ ခန္ဓာကိုယ်အပြင် ပေါင်တံနှစ်ချောင်းကြားမှာ ကြီးထွားလှတဲ့ ပစ္စည်းကြီးက လည်း ပိုင်ဆိုင်သေး။ ကျွန်တော် အ၀တ်တွေအားလုံး သူ့ရှေ့မှာချွတ်လိုက်တော့ သူ့မှာ ဟာသတောင် ဖြစ်နေသေးတယ်။ 'မင်းလို ခန္ဓာကိုယ်ထွားတဲ့သူအနေနဲ့ မသေးဘူးလားကွာ' ကျွန်တော် ဘာမှတ်ချက်မှ မတုန့်ပြန်တော့ပါဘူး။ နောက် မိနစ် ၂၀လောက်ဆို ဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေခဲ့ပြီပဲ။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးအနှံ့ ကျွန်တော် မွှေးပျံ့တဲ့ ဆပ်ပြာမြှုပ်များဖြင့် သန့်စင်ပေးလိုက်ပါ တယ် ဂရုစိုက်စွာပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သန့်ရှင်းစေလိုက်တာ။ သူ့ငပဲက နည်းနည်းပဲဖောင်းကြွသေးပေမဲ့ ကျွန်တော့်ဟာက ကျောက်ဆိုင်ကျောက်သားလို ဖြစ်နေပါပြီ။ အားလုံးပြီးလေတော့ သူ့အိပ်ခန်းကို ကျွန်တော့်အားခေါ်သွားစဉ် တစ်ညလုံး ကောင်းကောင်း service ပေးဖို့က ကျွန်တော့်တာဝန်တဲ့။ ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဒုတိယအခွင့်အရေးပေါ့။ 'မင်းက ငါ့အတွက် တစ်ညလုံး bottom နေပေးရမှာနော်'။ တော်လောက်ပြီ ...သည်းခံတာ တော်လောက်ပြီလို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူ့ပါးပြင်ကို ဖြန်းကနဲမြည်ပြီး နောက်ယိုင်ကျသွားအောင် ကျွန်တော်ရိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို အိပ်ယာပေါ် ပစ်တင်လိုက်ရင်းပေါ့။
'Look, you pansy fucker ကျုပ်က Sea men မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူ၊ နားလည်လား။ ဂိုထောင်ထဲမှာ ပင်ပန်းပြီး သိပ်နေမကောင်းလည်း ခင်ဗျားတို့အတွက်ဆို အလုပ်လုပ်ပေးရတာချည်းပဲ ရတာနဲ့ မတန်အောင်။ အခု ခင်ဗျားအလှည့်' သူ တုံ့ပြန်ချင်စိတ်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တုန့်ပြန်ဖို့ စိတ်သိပ်မရှိဘူးထင့်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံကို သူ့မျက်နှာဆီအပ်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့လည်မျိုထဲအထိ ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ 'ကိုက်လေ....နည်းနည်းလေး တစ်ချက်ကိုက်ကြည့် ခင်ဗျားခေါင်းကို ဖြုတ်ပစ်မယ်' တကယ်တန်းကျတော့ သူ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို သွားရာတောင်မပေးပါဘူး။ ကျွန်တော် သူ့ကို ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေ တစ်လုံးခြင်းငုံစုပ်စေပြီးနောက် အိပ်ယာပေါ် ပက်လက်ဖြစ်အောင် တွန်းလှဲလိုက်ကာ ကျွန်တော့်တင်ပါးအစုံကို သူ့မျက်နှာစီအပ်လိုက်ပါတယ်။ 'အဲဒါကိုကောင်းကောင်း လုပ်ပေး... လုပ်ဗျာ'
သူကျွန်တော့်တင်းပါးတွေကို အဝေးကိုတွန်းပို့ဖို့ကြိုးစားသေးတယ်။ ကျွန်တော်က နို့သီးခေါင်းတစ်ဖက်ကို အသာဆွဲပြီး ပွတ်ချေတော့ သူ့တွန်းပို့မှုဟာ ငြိမ်သွားရဲ့။ ပြီးတော့ သူ့လျှာ ပူနွေးနွေးဟာ ကျွန်တော့် ခရေ၀စီ တို့ထိတို့ထိလုပ်ပါတယ်။ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုအသာဖြဲ ကာ မာတောင့်အောင်လုပ်ထားတဲ့ သူ့လျှာဖျားလေးပိုမိုတိုးဝင်အောင် ဖိဖိထိုင်တာပေါ့။ သူ့အသံပြုမှုကို ကြားရပါရဲ့ အသက်ရှူဖို့ လေရ အောင်ကြိုးစားရင်း။ ဒါပေမဲ့ သူအသက်ရှူလို့ရသည်ဖြစ်စေ မရသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို သူ့နှုတ်ခမ်းမှာတေ့ထားလိုက်တယ် လေ။ မာတောင်နေတဲ့ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ပစ်လိုက်တယ်။ နာကျင်မှုကြောင့် သူကုန်းထသော်လည်း သန်မာတဲ့ ကျွန်တော့်လက်မောင်းတွေနှင့် တင်ပါးဆုံရဲ့ဖိအားကြောင့် အထမမြောက်ခဲ့။ မာပြီးရမ်းနေတဲ့ သူ့ငပဲနှင့် ရွှေဥတွေကိုလည်း ခပ်ဆတ် ဆတ်ရိုက်ပစ်တယ်။ သူ့အော်သံဟာ ကျွန်တော့်ဖင်ထဲပျောက်ဆုံးသွားပေါ့။ ကျွန်တော့်လုပ်ဆောင်မှုတွေကို မရပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော် သူ့အပေါ်ကထ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပွေ့ချီလိုက်ကာ မှောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ တင်းရင်းပြီးအိနေတဲ့သူ့တင်ပါးတွေကို ရိုက်ပစ်တယ် ။ သူ စူးစူးရှရှအော်လေ ကျွန်တော့် ရယ်သံက ကျယ်လောင်လေပါ။ တင်ပါးတွေ နီရဲနေကာ သူ့ခမျာ ဟိုသည်ရွေ့။ ပထမ လက်ညှိုးတစ် ချောင်း၊ နောက်လက်ချောင်းတစ်ခု၊ ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုကို အမွှေးအမျှင်မရှိ ပန်းသွေးရောင်ထနေတဲ့ ဇော်ကို့ခရေ၀ထဲ သွင်းလိုက် တယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို လှုပ်ရှားပါတယ် လက်ချောင်းတွေ ဆက်လက်အထုပ်အသွင်းမပြုစေဖို့။ 'ဒီည...ခင်ဗျားဟာတွေအားလုံး ကျုပ်ပိုင်တယ်' သူ့ကို ကစားရတာ ကျွန်တော့်အတွက် ဖီလင်အရှိန်မြင့်စေပါရဲ့။
အရမ်းမိုက်တယ်! ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ကျောက်ဆိုင်ကျောက်သားအလားပါပဲ။ သူ့တင်ပါးတွေကို တစ်လုံးကို ဆတ်ကနဲရိုက် သူ့ပါးပြင်ကို လည်း နီရဲနေအောင် လက်ရာပေးပြီးနောက်မှာ မာတောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ငပဲက အတော်ထွားပြီးရှည်လျားကာ ရွှေဥ တွေကတော့ ငပဲအောက်မှာ။ သူ့ပေါင်ခွဆုံကို ကိုင်ပြီးဖျစ်ညှစ်တော့ သူ့ကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ဖို့ ကျွန်တော့်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ ကြီးထွားရှည်လျားတဲ့ သူ့ခရမ်းသီးထိပ်ကို ဖျစ်ညှစ်တော့ ခပ်တိုးတိုး သူညည်းသလို ပစ္စည်းကလည်း ပိုမိုမာလာရော။ ကျွန်တော် သူ့ ပေါင်တံ ခြေတံတွေကို လေပေါ်မြောက်စေရင်း သူ့ခရေ၀ကိုလျှာနဲ့ကစားပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့ပါးစပ်ကညည်းညူသလို သူ့ပစ္စည်း သူ့ ဖာသာကိုင်ကာ ကစားပါရော။ တံတွေးတို့ဖြင့် စိုရွှဲနေပြီးနောက် မနေနိုင်မထိုင်နိုင် တရွရွဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်ညီဘွားကို သူ့ခရေ၀ ထဲဖိပြီး တဆုံးသွင်း၊ နီရဲနေတဲ့ သူ့နို့သီးခေါင်းကိုလည်း ဆွဲကာ ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ချက်ပေးပါတယ်။ အိထွေးပြီး တင်းကျပ်နေတဲ့ သူ့ ခရေတွင်းရဲ့ ညှစ်အားကြောင့် ကြာရှည် သိပ်မထိန်းနိုင်ခဲ့ပါ။ ခပ်မြန်မြန် ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ သူ့ပါးပြင်ကို ဗုံတံခေါက်လိုက်ကာ သူ့မျက်နှာ ပြင်ပေါ် သုတ်ရည်တွေ ရွှဲစိုသွားစေလိုက်တာ။ သူ့လည်း သူ့ငပဲကို ကစားရင်း မကြာခင်မှာပဲ ပန်းထုတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ငပဲ ကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းလိုက်တော့ သူလည်းလုပ်ပေးပါတယ်။ အားလုံးပြီးဆုံးတော့ သူ့နံဘေးကို ကျွန်တော်လှဲ လျောင်းငြိမ်သက်တာ ခဏတာ။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော် ထရပ်လိုက်ကာ ရေချိုးခန်းစီသွား ရေနွေးနွေးဖြင့် သန့်စင်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ သူလည်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးမှန်း ကျွန်တော်သိရပါပြီ။ အ၀တ်မပါ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ထထိုင်တာ သူ့ပေါင်ကြားက ငပဲ မမာတော့ပဲ ပျော့ပြောင်းကာ အောက်ကိုကျ။ ကျွန်တော့်အသွင်ပြင်က သူ့ကိုကြောက်လန့်နေပုံပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါအတွက် အဖြေရှိပါရဲ့။ သူဘယ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ ဂျာမန်လူကြီးတစ်ဦးပိုင်တဲ့ Sea men မှာလုပ်နေတဲ့အတွက် ဘာ စကားလုံးနှင့်များ သူ့ကိုဆိုရမလဲ။ ဒါပေမဲ့ သူမခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါ။ သူ့ခုတင်ပေါ်မှာ တိတ်တဆိတ်ထိုင်နေရဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော် ပြန်ပြီလို့ သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်။ သူကျွန်တော့်ကိုကြည့် 'Please' တဲ့။ ကျွန်တော်ထင်တာက သူကျွန်တော့်ကိုတောင်းပန်လိမ့်မယ် သူ queer တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း တစ်ယောက်ကိုမှမပြောဖို့။ အထင်မှားသွားရပါတယ်။ သူက 'မသွားပါနဲ့ဦး' တဲ့လေ။ ကျွန်တော်ရယ် မောမိပါရော သူ့အဖြစ်ကိုတွေးရင်း။ အစက သူ Mr.Top ပုံစံမျိုး ကျွန်တော့်စီလှမ်းလာခဲ့တာလေ အခုတော့ သူက ကောင်ငယ်လေး တစ်ယောက် က ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ၊ ဘယ်အချိန်နှင့် ဘယ်လိုဆိုတာတွေကို သိချင်နေတဲ့ပုံ။ ကျွန်တော့်ငပဲခမျာ အစာမြင်တဲ့ မြွေ ဟောက်ဖြစ်ကရော။ ဒီညအနားယူပြီး ဘယ်လုပ်မယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်မယ်၊ ပြီးတော့ သူမလုပ်ချင်ခဲ့ရင်တော့ သူ့ခရေ၀ ကောင်းကောင်း လေးလျှာကျွေးခံရမယ် စတာတွေကို အတိအကျ ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူမနိုးထခင်မှာ ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အလုပ်က မနက် ၆နာရီမှာရှိတယ်လေ။ တစ်နေကုန် အလုပ်ကို ပြီးအောင်လုပ်နေ ရတော့ သူလာတာကို ကျွန်တော်မသိလိုက်ပါဘူး။ သူ့ပါးပြင်တစ်ဖက်က ကျွန်တော်ရိုက်ခတ်ခဲ့စဉ်က အတိုင်း နည်နည်းရဲနေဆဲပါ။ သူ လမ်းလျှောက်ဟန်ကလည်း ဂရုတစိုက်လှမ်းနေဟန်။ ကျွန်တော့်သူဋ္ဌေးနှင့်လည်း အိုကေပါတယ် စကားပြောတာ။ ကျွန်တော့် Boss ခပ် လှမ်းလှမ်းရောက်သွားချိန်မှ သူကျွန်တော့်ကိုကြည့်ကာ 'ဒီည ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ့်အိမ်?' ကျွန်တော်ရယ်မောပြီး ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။
'Shit! ဒီဘ၀က ကောင်းမွန်ခဲ့ရဲ့လား ဒါမှမဟုတ် ဘာလဲ?'
Alex Aung (25-3-2011)
Posted by Alex Aung at 7:02 PM 1 comment:
ရင်တွေတထိတ်ထိတ်ခုန်ကာ ဘယ်လိုပျော်နေမှန်းမသိပါဘူးဗျာ။ ခါတိုင်း ကျွန်တော်ရယ် သူရယ် ညနေခင်း ကျောင်းကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ တွေပြီးမှ ဆူးလေနားကကားမှတ်တိုင်မှာ ဆုံရပ်လုပ်ပြီး လမ်း၂၀မှာ မုန့်သွားစား၊ ရုပ်ရှင်အတူကြည့်နှင့် ပျော်ကြရတာပါ။ အခု သောကြာနေ့ည ၇း၀၀ နာရီ သူ့အဒေါ်တွေအိမ်သားတွေမရှိ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ချစ်သူလေးအခန်း ကျွန်တော်ရောက်နေခြင်းပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အပြင်ကို လုံးဝထွက်မှာမဟုတ်သလို သူငယ်ချင်းတွေ ဖုန်းဆက်ရင်လည်း အလုပ်များကြောင်းပြောရမှာပါပဲ။ သူ့အိမ်သား တွေ အားလုံး အမျိုးတွေဆီ အလည်သွားကြတာ ကျွန်တော့်အတွက် ကံကောင်းခြင်း။
သူ့ခုတင်မွေ့ယာကြီးပေါ် နှစ်ဦးသားခွေနေကြတာ ဘေးမှာလည်း စာအုပ်တွေ လက်ထဲမှာလည်း TV Remote နှင့် ညအလယ်မှာ တိတ် တဆိတ် ပေါ့။ Channel တွေကို ဟိုသည်ပြောင်းရင်း တီဗီပေါ် အာရုံစိုက်နေမိကြတယ်။
ချောမောလှပတဲ့ ချစ်သူ့မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်ကြည့်နေရတာ သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကြယ်စင်အလားတောက်ပနေတာပဲ။ မေးရိုးတ လျှောက် စိမ်းဖန့်ဖန့်ဖြစ်နေတာကလည်း အသည်းယားဖို့ကောင်းသေးတော့တာ။ ပန်းသွေးရောင်သမ်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်း ထူအမ်းအမ်း လေးက ရင်ခုန်စေမယ့်အရာပါ။ ဟွန်း....သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော်စိုက်ကြည့်နေမှန်းသိတော့ စာအုပ်နှင့် ကွယ်ထားဟန်ပြုပြီး စနောက် နေသေး။
'ကို....Opra's show ကြည့်ချင်လား?' သူနွမ်းနယ်နေတဲ့ မျက်တောင်တွေကို တဖြတ်ဖြတ်ခတ်ရင်း ကျွန်တော့်ကိုမေးတယ်။
သူ့မျက်ဝန်းတွေကို အဲဒီတော့မှ စိုက်ကြည့်မိတာ နည်းနည်းချောင်နေသလိုပဲ။ သနားစရာ ကျွန်တော့် boyfriend လေး သူ့ကျောင်းကိစ္စ ကိုကြိုးစားရသလို ကျွန်တော့် မာစတာဒီဂရီယူဖို့ကိစ္စကိုလည်း သူစိုးရိမ်ကြောင့်ကျရတာကြောင့် အိပ်ရေးပျက်မောပန်းနေဟန်တူရဲ့။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် မထိန်းနိုင်ခင်မှာပဲ သူ့ဘက်ကို ကျွန်တော့်ကိုယ်အား အုပ်မိုးစေလိုက်ကာ ချိုမြိန်တဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းရှိုက် လိုက်ပါတယ်။
'အဲဒါလွှင့်နေတဲ့ Channel ကို Yes လုပ်လိုက်ပါဆိုတဲ့သဘောလားဟင်?' သူကြည်နူးဟန်ဖြင့်မေးသေးတာ။
'ဘာကြည့်ချင်လည်းကြည့် အားလုံးအိုကေတယ်၊ ဟုတ်ပြီလား ဘေဘီ?' သူ့နံဘေးကို တိုးကပ်ထွေးဖက်ရင်း ဖြေလိုက်ပါတယ်။
'ဒါဆို အခုလောလောဆယ် ညီတို့ ဘာကြည့်မယ်လို့ မှန်းထားတာမရှိဘူးပေါ့ ? ဘာလဲ...ကွာ'
ကျွန်တော်သဘောတကျ ရယ်မောလိုက်ရင်း သူ့ပခုံးပေါ်ခေါင်းတင်ပြီးမှေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးနွေးပြီး သက်သောင့်သက်သာ ရှိနေလိုက်တာ။ ချည်သားဘောင်းဘီတိုပွပွတစ်ထည်နှင့် ကပိုကရိုအပြဲရာဒီဇိုင်း တီရှပ်တစ်ထည်ဝတ်ထားတာဗျ။ အကြောင်းပြချက်အချို့ အတွက်တော့ ဒါဟာကြည့်ရသူကို turn-on ဖြစ်စေသား။
'ညီနှင့် အတူနေရရင်ကိုပျော်နေပြီ။ ကို ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ဒီညဘာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ကြည့် အရေးမကြီးပါဘူးလေ'
သူ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးရွှင်စွာကြည့်ရင်း သူ့လက်မောင်းအစုံနှင့် ကျွန်တော့်ကိုထွေးဖက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့လက်သည်းလေးတွေဖြင့် ကျွန်တော့်ကျောပြင်အနှံ့ဟိုသည်ခြစ်ရင်းပေါ့ ခဏတာ။ တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ သူ့ထွေးဖက်မှုဟာ တင်းကြပ်လာသလို လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ညအိတ်ဘောင်းဘီထဲလျောဆင်းလာပါတယ်။ တင်ပါးအစုံကိုပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်သလို ကျောပြင်ကိုလည်း ငြင်ငြင် သာသာ။ ကျွန်တော်လည်း အားကျမခံ သူ့ရင်အုပ်ကို ကိုင်တွယ်ကစား အောက်ကို လျောဆင်းရင်း ချည်သားဘောင်းဘီပွဆီ သွားလိုက် တာ Wow! မာတောင်ပြီး တင်းနေတဲ့ ငပဲကို စောင်ပါးအောက်မှာ သွားမိပါရော။
ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ကာ 'ညီအရမ်းပင်ပန်းနေတာမဟုတ်ဘူးလား?' လို့မေးလိုက်တော့ 'ကို့အတွက်ဆို ဘယ်တော့မှ အရမ်းပင်ပန်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူး' ဟု ရယ်မောပြီး ဖြေတယ်။
ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကို ကန်ချွတ်လိုက်ချိန်မှာ သူက ၀တ်ထားတဲ့ တီရှပ်ကို လက်ကိုမြှောက်ကာ ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ၇လက်မနီးပါးရှိ တဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ဘတ်ကနဲမြင်ကွင်းမှာပေါ်လာပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ချစ်သူလေးဟာ အတော့်ကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပုလွေမှုတ်သမားပါပဲ။ ဒီကိစ္စမှာ သူ့ကို ကျွန်တော် credit ပေးရလိမ့်မယ်။ သဘောကျ ကိုင်လိုက်တာ သူ့နှုတ်ခမ်းက 'ကောင်းလိုက်တာ' တိုးတိုးညည်းရင်း စတင်စုပ်မှုတ်ပါတော့တယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို မျှဉ်းစုပ်၊ ငပဲတစ်ချောင်းလုံး အာခံတွင်းထဲထည့်ပြီး ထိပ်ဝလေးကိုလျှာဖျားနှင့် ကစား လိုက်သေး။
အိပ်ယာပေါ် ပက်လက်အနေအထားမှာသူက ပေါင်ခွဆုံဆီ ခေါင်းအပ်ထားတော့ ကျွန်တော် သူ့ပခုံးကိုလှမ်းဆွဲအပေါ်ကိုရွှေ့စေရင်း နှုတ်ခမ်းထူထူလေးကို နမ်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစတင်ပြီး လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြတဲ့ ညတုန်းကလို ပဲ သူ့စိတ်အားထက်သန်နေပါရဲ့။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားကြား စိတ်ချရတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုဘ၀ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့ သောအကြောင်းပြချက်များအတွက် ဒီနေ့ညတော့ ကွဲပြားခြားနားမှာပါ။ အိမ်တစ်အိမ်တည်းမှာ နှစ်ဦးအတူနေထိုင်အိပ်စက်ရခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်လည်းပါမည်ထင့်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦး ချစ်ရည်လူးတဲ့ကိစ္စကတော့ အိမ်သားတွေ ပြန်မလာခင်အမုန်းဆွဲ...ဟိ။
သူ့အနမ်းရေယာဉ်ကြောမှာ ကျွန်တော်မျောပါပြီ။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို တစ်ချက်ခြင်း ဖိစုပ်ပြီးနမ်းသလို ကျွန်တော့်လည်တိုင်၊ ပခုံးတွေပေါ် အနမ်းရွရွပေးတာ ကြက်သီးများပင် ထရသေးတော့တာ။ အိုး.... ကျွန်တော့်နားရွက်ဖျားလေးတွေကို မျှဉ်းပြီးစုပ်သလို နားဝ ကိုလည်း လျှာဖျားလေးနှင့်ကလိတယ်။ လည်မျိုတလျောက် အနမ်းစိုတွေသူပေးတော့ ကျွန်တော့်သွေးကြောထဲထိစိမ့်ကာ ညီဘွားထိပ်က အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက်ရပါရဲ့။ သူလည်းထို့အတူပါပဲ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လားမသိ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှ ချွေးနံ့နှင့်အတူ အနံ့တစ်မျိုးရ မိသလိုလို။ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ ကိုယ်နံ့လား?။
နှစ်ဦးသား တင်းကျပ်စွာ ဖက်မိရရင်း အိပ်ယာပေါ်လူးလှိမ့်မိကြတယ် နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်စီပေါင်တံတွေနှင့် ခွထားကြရော။ သူ့မျက်နှာ အပြုံးပေါ်လာတယ်။ နောက် ဘာဆက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ သူသိနေခဲ့ပြီလေ။ အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ မောင်မယ်သစ်လွင်လေးတွေ ဖြစ်စနေ့ကတည်းက သိကျွမ်းခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ ဆဋ္ဌမအာရုံများရနေကြသလားမသိ တစ်ယောက် ဘာလိုအပ်နေ တယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ကသိတယ်။ ဖရိုဖရဲခေါင်းအုံးပေါ် ပက်လက်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့ မမာ့တမာ နို့သီးခေါင်းလေးကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့် ညှပ်လိုက်တယ်၊ လျှာဖျားလေးဖြင့် စက်ဝိုင်းပုံရစ်ပတ်ရင်းပေါ့။ သူ့ကျောပြင်တွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ကော့လှန်ထိုးရင်း ပါးစပ်ကလည်း ညည်းညူမိန်းမောသံက အူတွေထဲကထွက်လာသလိုမျိုးဖြစ်လာပါတယ်။ သူ့ရဲ့တကယ့်အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်က အထိမခံ နို့သီးခေါင်းများပါပဲ။ အခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကိုသာဆက်ပြီးအစွမ်းပြလိုက်ရင် အချိန်သိပ်မယူရဘဲ သူ့ဇာတ်လမ်းဆုံးသွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ သူ့နို့သီးခေါင်းကို စက်ဝန်းပုံလျှာဖျားနှင့် ခပ်မြန်မြန်ဆွဲ၊ သူ့တင်ပါးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတာကို ဖြစ်နေဆဲ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း သူ့လည်တိုင်ကို အနမ်းတစ်ချက်ပေးကာ ရပ်တန့် လိုက်ပါတယ်။ အခုမှ သူလည်းအသက်မှန်မှန်ပြန်ရှူရင်း စိတ်ပြန်တည်ငြိမ်စေရဲ့။
'အခု ညီ့နို့သီးခေါင်းတစ်ဖက်က ၀မ်းနည်းနေပြီနော်' နှုတ်ခမ်းလေးကိုစူရင်းပြောတာ ကျွန်တော်ရယ်စေဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ကျွန်တော် လည်း သူ့ရင်ခွင်ထဲ ခိုဝင်လှဲလျောင်းလိုက်ကာ တခြားနို့သီးခေါင်းလေးကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးသည်ပေါ့။ သူသိပ်ပြီး ဖီးလ်သိပ်မမြင့် ခင်လေးထိဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လှဲအိပ်နေတဲ့ဘက်ခြမ်းရဲ့ ခေါင်းအုံးနားထိတွားတက်လိုက်ပြီး ခုတင်ဘေးက အံဆွဲထဲမှ Lube ဘူးကို ယူလိုက်ပါ၏။
'ကို့ကို ဘာနဲ့ဆက်ပြီး ဂုဏ်ပြုဦးမလဲ ညီ' သူ့ကိုရယ်ဟဟနဲ့ ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်ကို သူပြန်ပြုံးပြပြီး နှုတ်ခမ်းအစုံကိုအားပါးတရ နမ်းရှိုက်ပါရော။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ငပဲထက် ပိုမရှည်ပေမဲ့ သတိထားမိလောက် အောင် တုတ်သော ထိပ်အရေပြားမဖြတ်ထားသော ညီဘွားပေါ်ကို အလွှာပါးတစ်ခုတပ်ဆင်တာကို စောင့်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ခဏတော့။ ချောဆီဘူးကိုအနည်းငယ်ညှစ် သူ့လက်ခလယ်မှာရွှဲရွဲစိုစေရင်း ဘေးတစောင်းလှဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါးဆုံကြားက ခရေ၀ဆီ ထိုးသွင်း ပါတယ်။ အထုတ်အသွင်းလုပ်လိုက် ချောဆီထပ်ထည့်လိုက်လုပ်ရင်း ခဏနေတော့ လက်ညှိုးရော လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းလုံးပူးထည့် ကာမွှေပါတော့တယ်။
'အာ.... 'ကျွန်တော်နည်းနည်းနာလို့ အော်မိသွားတယ် အံ့သြစိတ်လည်းပါတာပေါ့။
'အို....ရှီး...ကို လိုချင်နေတာ ညီသိပါတယ်' သူ ကျွန်တော့်နားရွက်နားကပ်ကာ မာန်ဖီသလိုပြောသေးတယ်။
ချစ်စရာကောင်ငယ်လေးဟာ ညစ်တီးညစ်ပတ်စကားတွေကိုလည်း တစ်ခါတလေဆိုတတ်သေး။ အင်း... သူပြောတာမှန်တယ် ကျွန်တော် အဲဒါကိုလိုချင်နေတာ။ 'အာ...အ...ရှီး 'သူ့လက်ချောင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်နေတာကို မနေနိုင်စွာ နောက်ပြန်ဆောင့်ကာ လက်ချောင်း တွေအဆုံးထိဝင်စေပါတယ်။ လက်ချောင်းတွေကို ထုတ်ပစ် ကျွန်တော့် ဒူးတွေကိုဆွဲကိုင်ကာ ကွေးစေရင်း သူကကြားထဲနေရာဝင်ယူပါ တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီ သူနီးကပ်စွာငုံ့ကိုင်းလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်အနမ်းကို သူ့နှုတ်ခမ်းများဖြင့် ငံ့လင့်ရဲ့။ ကျွန်တော်လည်း သူ့လည်တိုင်ကို ကျွန်တော့်လက်မောင်းတွေဖြင့် တွဲခိုရင်း နှုတ်ခမ်းခြင်းဆုံဖို့ ဆွဲယူလိုက်ပါတယ်။ ဘုရားသခင် ကျွန်တော် သူ့နှုတ်ခမ်း အစုံကို နမ်းရှိုက်ထိတွေ့နေရခြင်းကို တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်။ ထူထူပြည့်ပြည့်နှင့် နုညံ့သောသူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ မောပန်းမယ်မထင်ပါ။ 'အ' သူ့ငပဲခေါင်းကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲထိုးသွင်းစပြုတာကိုခံစားရပါပြီ။ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံးသွေးတွေဆူကာ ချွေးပြန်စပြုလာသလို သူ့ဆံနွယ်တွေဟာ ပခုံးတ၀ိုက်ဝေ့၀ိုက်ကျနေပြီး ရင်အုပ်ဆီချွေးလေးတွေစို့ကာ စီးဆင်းလာတာကိုမြင်နေရပါတယ်။ သူ့လည်တိုင်ကို ခိုမှီနေတာကို ပိုမို ဖက်တွယ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို သူ့ဆီးစပ်နှင့် ပိုမိုဖိကပ်ဖို့လုပ်ဆောင်လိုက်တာပေါ့။
ကျွန်တော့်ခြေအစုံကို သူ့ပခုံးပေါ်ဆွဲယူတင်ကာ သူ့ညီဘွားအထုတ်အသွင်းကိစ္စကို နည်းနည်းသွက်လာပါတယ်။ သူ့လက်မောင်း ကြွက်သားတွေဗိုက်သားတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို သတိပြုမိရသလို တခြားသူနှစ်သက်လုပ်ဆောင်မြဲဖြစ်တဲ့ ရှန်တိန်လုပ်ပြီး မွှေတဲ့ကိစ္စကို လုပ်တာလည်း သတိပြုမိရပါပြီ။ နှစ်ဦးသား အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်း လှုပ်ရှားဖြစ်ပါရော။ သူ့ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုတွေက ပိုပြီးပြင်းထန် လာသလို ကျွန်တော့်မိန့်မူးသံကလည်း ကျယ်လောင်လာပါပြီ။ နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် ခပ်ပြင်းပြင်းဖိသွင်းလိုက်ချိန် သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော်မော့ကြည့်မိတာ မျက်ဝန်းတွေက စေ့ကပ်စွာပိတ်ထားရင်း သူ့ခါးကိုကော့လိုက်ကာ အရည်ပျစ်တွေကို ခပ်သဲ့သဲ့အော်ညည်းသံ နှင့်အတူ ကျွန်တော့်ကိုယ်တွင်းကိုထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ဦးခေါင်းကို ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထက်မှေးတင်ရင်း ခဏတာ ငြိမ်သက်။
ကျွန်တော့် နဖူးပြင်ကို နုနုညံ့ညံ့အနမ်းစတင်ပေးပါတယ်။ သူအနမ်းပေးလို့ရမယ့်နေရာမှန်သမျှပေါ့။ သူမောပန်းနေမှန်း ကျွန်တော်သိပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦး ဆက်ဆံပတ်သက်နေမှုက မပြီးဆုံးသေးပဲနော်။ ချစ်သူလေးကပျော့သွားတဲ့ သူ့ငပဲကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ညီဘွားကို မာသထက်မာအောင် သူလုပ်ပြီပေါ့။ ခပ်ကြာကြာသူလျှာတွေနှုတ်ခမ်းတွေနှင့် မပွတ်ဆွဲလိုက်ရပါဘူး ကျွန်တော့် အရည်ပျစ်တွေကို သူ့လည်မျိုထဲ ပစ်သွင်းပစ်လိုက်တယ်။ သူကလည်း မျိုချနိုင်သလောက် မျိုချတယ်ဆိုပေမဲ့ အဲဒါကိုက တော်တော်များ နေပါပြီလေ။ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းသန့်ရှင်းသွားသည်အထိ သူ့လျှာဖျားနှင့်သန့်ရှင်းပေးပြီးနောက် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကို ငံကျိ ကျိအရသာတစ်ခုပေးပါရဲ့။
'I love you I love you I love you" အနမ်းတွေကြား ကျွန်တော်ပြောမိရပါတယ်။
'I love you too baby' တဲ့ သူပြန်အဖြေပေးပြီးနောက် ကျွန်တော့်နံဘေး ခေါင်းအုံးပေါ်လှဲလျောင်းလိုက်ပါတယ်။
ညအိပ်မီးအိမ်ဘေးက နာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အတော်စောပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ တီဗီမျက်နှာပြင်ပေါ်က ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ကြာရှည်လှချည့်။ ကျွန်တော့်ချစ်သူလေးဘက် ခေါင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တာ သူ အိပ်မောကျသွားပါပြီ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးမျက်နှာ လေးနှင့်.....။
Alex Aung (18-3-2011)
Posted by Alex Aung at 4:05 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 8:21 PM No comments:
'မင်းကိုသိနေတယ်နော်' ဆိုတာ မင်းဘော်ဒါတွေကိုလည်း သိရတော့မှာဆိုတဲ့ အလားတူအဓိပ္ပာယ်ကိုသက်ရောက်စေတယ်။
ကျွန်တော့်အထက်တန်းကျောင်းက ဘော်ဒါတစ်ချို့နှင့် လိင်ဆက်ဆံပတ်သက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပထွေး ဦးရဲနှင့် ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ အဖြစ်နဲ့ဘယ်တော့မှ နှိုင်းယှဉ်၍ မရခဲ့စဖူး။အဲဒီမမျှော်လင့်သော ဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုအရ ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် ကြည့်ရှုဖို့အဆင်ပြေစေတဲ့ ကျွန်တော့်ရုပ်သွင်ဟာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပိုရှိစေပါတယ်။ လိင်ဆန္ဒ၊ ရမ္မက်၊ တက်မက်မှုတွေအကြောင်း စတင်စဉ်းစားစိတ်ဝင်စားမိချိန်က အလွန်ငယ်သော ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်၊ လက်တွေ့လိင်ဆက်ဆံမှုရှိချိန်က အသက် ၁၈၊ စောလွန်း တယ် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ရက်ရောလွန်းတယ်လို့လည်း တွေးမိရဲ့တစ်ခါတလေ။
ကျွန်တော်တွေးတော စဉ်းစားမှုအချို့ဟာ ပူလောင်လွန်းတယ် မတောင့်တအပ်ဘူးဆိုပေမဲ့ ဦးရဲနှင့်ထပ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ် ခံစားချက် ကတော့ အတွေးထဲ ရှိနေဆဲပါ။ သူ့မှာ လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုတာထက် နောက်ထပ် အစွမ်းထက်မှုတွေများရှိဦးမလား သိချင်စိတ်ပိုမိုလာပါပြီ။ တက်မက်မှုအပြင်းပြဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်မှုနောက် အခြားသောသူများနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကိုယ်ခန္ဓာတွေ့ဆုံဆက်သွယ် မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အလုံးစုံပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် သူငယ်ချင်းအချို့နှင့် ငပဲဆိုဒ်အတိုင်းအတာပြိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ တစ်ယောက် ဟာ တစ်ယောက်ကိုင်ကြည့်ပြီး -ွင်းထုပေးကြခြင်း၊ ပြီးတော့ ရှုံးသူက -ီးစုပ်ပေးရခြင်းတွေမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အရာအားလုံးသူ့ကို ပြောပြခဲ့ တာတော့မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်နှင့် ဦးရဲ 'ပြပြီးရင်ပြော' ဆုံးဖြတ်မှုမျိုး၊ အ၀တ်မ၀တ်အတူလှဲလျောင်းနေခြင်းမျိုး၊ ပြီးတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စိတ် လှုပ် ရှားဖွယ်အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောနေခြင်းမျိုးတွေ ပြုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လှုပ်ရှားပတ်သက်မှုတွေအပေါ် စိတ်ဝင်စား ခြင်းကို မေးခွန်းများထုတ်ခြင်းဖြင့် ဦးရဲကပြသပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ဖြေဖို့ ကျွန်တော် စိတ်အားထက်သန်ပါရဲ့ အရာအား လုံးက အမျိုးသားတွေဆီ မှာရှိတတ်တဲ့ လိင်တံဆိုဒ်အတိုင်းအတာတိုင်းတာခြင်းကနေ စတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဦးရဲတစ်ယောက် ကျွန်တော့် ရဲ့ ငနဲတွေနဲ့ ပတ်သက်မှုအကြောင်းအရာတွေနားထောင်ပြီးအရမ်း ဖြစ်ဟန်တူတယ် မေးခွန်းတွေက ထောင့်မျိုးစုံ။ ပတ်သက်ခဲ့သူ အများစုဟာ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တာအတွင်းဆိုတော့ ဦးရဲ အလွန့်ကိုအံ့အားသင့်နေတယ် ကျွန်တော်နှင့် ပတ်သက်သူများရဲ့ အမူအကျင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့။ ဦးရဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ သစ်လွင်တဲ့ အသွေးအသားတွေို့ သူနားထောင် ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုနားဆင်ရင်း စုပ်မျိုမှာဖြစ်သလို သူ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းအချို့ကိုကျွန်တော့်ကို ပြောပြတော့လည်း အလားတူ သူ့သွေးသားများကို စုပ်မျိုဖြစ်မှာပါ။သူနှင့် သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချို့အတူတကွ -ွင်းထုတာမျိုး တစ်ခါတလေ လုပ်ကြတာမျိုး တွေ နားဆင်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော့်သွေးသားတွေဟာ ငပဲထိပ်က သင်္ကြန်ရေပြွတ်လို ပန်းထွက်လုနီးပါး ခံစားရပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့် အဖြစ် ခံစားချက်ကိုသိဟန်တူရဲ့ ဖီလင်တက်စေမယ့် စကားတွေ ဆက်ပြောတာကြောင့် မထိန်းနိုင်ဘဲ သုတ်ရည်ပျစ်တွေကို ပန်းထုတ် ပစ်တာ ဦးရဲ.... တစ်စက်မှ အလွတ်မပေး အလဟဿမဖြစ်စေပါဘူး။
အတွေးစိတ်ကူးထဲ ဦးရဲနှင့် သူ့ဘော်ဒါတွေ ၀ိုင်းစုပြီး ဗုံတံခေါက်တမ်းကစားကြတာမှာ ကျွန်တော်လည်း ပါဝင်ကစားနိုင်မယ်လို့ စိတ်ကူး ယဉ်မိပါရဲ့။ သူတို့တွေအားလုံးဟာ လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူများချည်းပဲလား လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးလုံးစိတ်ဝင်စားကြသူများလား စိတ်ဝင်စား မှုတူသူခြင်း တစ်နေရာမှာစု လက်ကမြင်းကြတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ ဦးရဲက ကျွန်တော့်စိတ်ကူးအတွေးတွေကို သိသာမြင်သာဖြစ် သွားဟန်တူရဲ့ သူ့မျက်နှာက ရယ်ဟဟ။
နွေရာသီရဲ့တစ်ခုသောမနက်ခင်းမှာ ဦးရဲက မေးနေကျ 'ဒီနေ့ ကြံ့ခိုင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့' သူနဲ့ကစားဖို့မေးတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲက မဆီမဆိုင် မာတောင့်သွားတာ နှစ်ခါတောင် ခေါင်းဆတ်ပြသလားပဲ။ အလေးများများမနိုင်တာ အရေးမကြီးဘူး လေ့ကျင့်စဉ် ခန္ဓာကိုယ် အနေအထား တိုင်ပင်ကိုက်ဖို့ပိုအရေးကြီးသတဲ့။ သူ ဒီနေ့ အိမ်ကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ဘယ်အချိန်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာ ပြောပြပါ တယ်။ ကျွန်တော်က သူနှင့် လေ့ကျင့်ကစားဖို့ အဆင်သင့်လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ မာမီက နေ့လည်နှင့် ညနေခင်း သူမရှိချိန် ဂရု မစိုက်နိုင်ချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ဂရုတစိုက်နေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရာမှာလည်း ဒဏ်ရာအနာတရမဖြစ်စေနှင့်ဦးလို့ ပြောတော့ ဦးရဲက သဘောပေါက်သလို အားပါးတရပြုံးပါတယ်။ ဦးရဲက ကျွန်တော့်ကို မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြလိုက်ရင်း information ကိုအပြည့်အ၀ အသုံးချကြဖို့ အသိပေးဟန်ပါ။ ကျွန်တော့်ငပဲကလည်း စတီးပိုက်လိုကြိုတင်ပြီး မာနေပါပြီလေ။
အိမ်နံဘေး ကားဂိုထောင်ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်တွင်း gym မှာသွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း အလေး ဖြင့်မကစားခင် ခဏတာအချိန်ယူဖြစ်ပါတယ်။ နံရံနှစ်ဖက်စလုံး မှန်ချပ်အကြီးကြီးတွေဖြင့် ကာထားတာဆိုတော့ ရပ်ကွက်ထဲ ကဖွင့်ထားတဲ့ gym တစ်ခုအလားပါပဲ။ ဦးရဲနှင့် ကျွန်တော် ဒီမှန်ချပ်တွေရှေ့ ၀တ်လစ်စလစ်မနေဖူး မကစားဖူးသေးပါ။ စိတ်ကူးထဲမှာ တော့....ဟီးဟီး စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းသား။ မှန်ချပ်ထဲ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ဘယ်ညာလှည့် ကြွက်သားတွေကိုညှစ် လှည့်ပြု ကြည့်ပြီးကျေနပ်မိပါတယ်။ လက်မောင်းကြွက်သား၊ ရင်အုပ်၊ ဗိုက်ကြွက်သားမြှောင်းတွေ၊ ပေါင်တံကြွက်သား....ပြီးတော့ ပေါင်ခွဆုံက ဘောင်းဘီထဲက ကြွက်သားမြှောင်းကြီးကလည်း ဖုထလို့။ ဦးရဲ အဲဒါကိုတော်တော်သဘောကျမှာ။ ဦးရဲ အပြေးလေးလှမ်းလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခါတိုင်းသူရောက်ချိန်ထက်နည်းနည်း နောက်ကျပါရဲ့။ သူရောက်လာချိန်ခဏ ကျွန်တော့် စိတ်နှလုံးတွေ ခါရမ်းသါားသလိုပါပဲ။ သူ့နောက်မှာ ဇော်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲတစ်ဦး လိုက်ပါလာတာကိုး။ ဦးရဲပြောပြလို့ ကြားဖူးနေကြ ဇာတ်လမ်းများထဲမှာ ပါနေကျ ဦးရဲဘော်ဒါတစ်ယောက်ဆိုတာ သတိရမိပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ပထွေး ဦးရဲနှင့် ဟိုဒင်းဟိုဝါ လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ချထားတာ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။
ဇော်ကြီးဆိုတဲ့လူက ဦးရဲနှင့် အသွင်အပြင်အတော်တူပါတယ်။ ဦးရဲက Simon Cowell နှင့်နည်းနည်းဆင်တယ်ဆိုရင် ဇော်ကြီးက Howie Long နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ဇော်ကြီးက ပိုထွားပြီး ကြွက်သားထုပိုများတယ်ဗျ။ သူက အဖြူရောင် Police တီရှပ် ဘော်ဒီဆိုဒ်နဲ့ ခပ်ပွပွဘောင်းဘီတိုကိုဝထ်ထားတာ ကြီးထွားတဲ့ရင်အုပ်နဲ့ ခပ်ထွားထွားငပဲကောက်ကြောင်းကို ပြသနေသလိုပါပဲ။ ဦးရဲ ကတော့ အသားခပ်ပျော့ပျော့ ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်နှင့် ဂျင်းဘောင်းဘီခပ်ကျပ်ကျပ်ကို ၀တ်ထားပါရဲ့။နည်းနည်းတော့ ပျင်းဖို့ကောင်းသား သုံးယောက်သားအလေးတုံးတွေ၊ စက်ပစ္စည်းအချို့နှင့် ကိုယ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်စဉ်တွေကို စကားမဆိုဘဲ ကစားနေကြတာ ပြိုင်ပွဲ ၀င်တော့မယ့် လူတွေလိုပါပဲ။ bench presses အချို့ကို ကျွန်တော်ကစားစဉ်မှာတော့ ဇော်ကြီးက ကူညီထိန်းကိုင်ပေးတာ သူ့ shirt အင်္ကျီကျပ်ကျပ်မှ ထုကောင်းတဲ့၊ လက်မောင်းဆုံကြွက်သားတွေကို ကျွန်တော်သတိပြုမိပါရဲ့။ သန်မာလှပတဲ့ ကြွက်သားဆိုင်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကိုမြင်ရတာ တကယ့်ကို turn-on ဖြစ်စေပါတယ် ကျွန်တော့်အတွက်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် လေ့ကျင့်ကစား နေတုန်းမှာ လိင်မှုကိစ္စအတွေးတွေဝင်လာမိတာ တကယ့်ကို အဦးဆုံးပါ။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဇော်ကြီး အပူရှိန်ပေါ် သတိပြုမှတ်ချက်ချရင်း သူ့တီရှပ်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ Wow! အရမ်း good တယ်။ ဦးရဲ ကလည်း ရာသီဥတုပူနွေးမှုကို ထောက်ပြပြောဆိုကာ ဘောင်းဘီကိုပါချွတ်လိုက်ဖို့ပြောပါတယ်။ ဇော်ကြီး စကားတစ်ခွန်းမှမဆိုဘဲ baggy ဘောင်းဘီတိုကိုလျှောချွတ်လိုက်ကာ အဖြူရောင် briefs ဘောင်းဘီနှင့်ရပ်နေတော့ အထုပ်အထည်ကြီးက ကြီးကြီးမားမား။ မျက်စိထဲမြင်ယောက်ကြည့်ပါ ကျစ်လစ်တောင့်တင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အဖြူရောင် jockey briefs ၊ အဖြူရောင်ခြေအိတ်နှင့် အဖြူရောင် sneakers ။ Hot! ဦးရဲလည်း သူ့ဘောင်းဘီတိုကို ကြမ်းပြင်ပေါ်လျှောချလိုက်တယ်။ ကစားပွဲတစ်ခုစတင်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလို့ အရိပ် အမြွက်ရတာကြောင့် ကျွန်တော်လည်း အားကစားဘောင်းဘီတိုနှင့် shirt ကိုချွတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော့်ငပဲ မာတောင်ပြီး တင်းနေပုံ ကို ဇော်ကြီးတစ်ယောက် အာရုံစိုက်တာအကြီးအကျယ်။
ဦးရဲ....ဇော်ကြီးဆီလှမ်းလာပြီး သူ့လက်မောင်းတွေနှင့် ရစ်ပတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့လက်တွေဟာ ဇော်ကြီးပေါင်ခွဆုံဆီသွားပါရဲ့။ ကျွန်တော် သူတို့နှစ်ဦးနှုတ်ခမ်းခြင်းတေ့ပြီး နမ်းရှုံ့ကြတာ၊ နောက်ပြီး ဦးရဲက ဇော်ကြီးရဲ့ ဒစ်ထွားထွားကို ဘောင်းဘီဘေးကနေဆွဲထုတ် လိုက်ပြီး ပွတ်သပ်ကစားတာ စသည်တို့ကြောင့် စိတ်ညှို့ခံရသလို မိန်းမောသွားရပါတယ်။ ဇော်ကြီးက သိပ်စိတ်မ၀င်စားသလိုဟန်နှင့် ဦးရဲ ကျွန်တော့်ကို သူတို့နှင့် အောင်လုပ်တာကိုရော ကြည့်နေတယ်လေ။ ကျွန်တော် ဦးရဲဆီ မရဲတရဲလှမ်းသွားတော့ ဦးရဲ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းကို အားရပါးရစုပ်ယူသလို သူ့လျှာအရှည်ကြီးကိုလည်း လည်မျိုထဲရောက်မယ့်အလား ထိုးသွင်းပါရော။ ကျွန်တော့်ငပဲကိုလည်း ကောင်းကောင်းလက်ပူတိုက်ပေးသေးတယ်။ ဇော်ကြီးက စောင့်ကြည့်နေတာ ဒါမှမဟုတ် ဘာမှကို လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲ ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှား နေတာကို အာရုံယူနေတာလေ ဆယ်မိနစ်လောက်။ သူ့အနားကို ကျွန်တော်တို့ရွှေ့သွားတော့ ဇော်ကြီးက ကျွန်တော့်ငပဲနှင့် ဦးရဲ လဒစ် ကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် ဆုပ်ကိုင်ကာ ခပ်သွက်သွက်လက်ကစားတာများ နာတောင်နာတယ်။ သူ့နှုတ်ဖျားကလည်း အားရစရာ ကောင်း လိုက်တာ၊ သောက်ရမ်းမိုက်တယ်ဆိုတာကို အားရပါးရပြောသေးတာ။ ဦးရဲ...ဇော်ကြီးဆီလှမ်းသွားကာ ဒူးထောက်ထိုင်ရင်း ဇော်ကြီးငပဲကို -ုပ်မှုတ်တော့ ကျွန်တော့်မှာကြည့်ရင်း ငပဲထိပ်က အရည်ကြည်တွေ များစွာမထိန်းနိုင်ဘဲ ထွက်မိရပါတယ်။
ဒီလိုနေ့တစ်နေ့တာရဲ့ ရင်လှိုက်သည်းဖိုဖြစ်စေသော အမေးစကားက ဦးရဲနှင့်ကျွန်တော် အပြန်အလှန် စုပ်မှုတ်တာကို ဇော်ကြီးကကြည့် ချင်လို့ပါဆိုတာလေ။ ကျွန်တော်နှင့် ဦးရဲက ဘယ်လိုအနေအထားပဲဖြစ်ဖြစ် အိုကေကြတယ်ဆိုတာ သူမသိစေချင်တာကြောင့် မရွဲ့မရဲ ဟန်ပြုကြပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ အလိုက်သင့်အဆင်ပြေမယ့်အနေအထားကိုနေလိုက်ကြတယ်။ ဦးရဲက တမက်တမော ကျွန်တော့်ငပဲကို နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေနှင့် ကစားသလို ကျွန်တော်သည်လည်း ဦးရဲ၏ညီဘွားကို ငုံစုပ်မိပါရော။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား လေထုထဲမျော နေကြတာ ပြန်သတိလည်ချိန်မှာတော့ ဇော်ကြီးလေ ခပ်သွက်သွက်သူ့ငပဲကို ကစားရင်း ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ် အရည်ပျစ်တွေနှင့် ပက်ဖျန်းနေတာ။ ဦးရဲနှင့် ကျွန်တော်သည်လည်း 69 အနေအထားနှင့် ခဏသောအချိန်မှာ အဆုံးစွန်သော ခံစားချက်ကို ပြိုင်တူလိုလို ခံစားမိကြပါတယ်။ သုံးယောက်သားရေချိုးခန်း ကျဉ်းကျဉ်းထဲဝင် ရေပန်းမှတစ်ဆင့်ရေတွေ တဗြန်းဗြန်းကျစေရင်း ကိုယ်ခန္ဓာတွေကို သန့်စင်ဖြစ်ရပါရော။ ဇော်ကြီးက နောက်တစ်ခါ ဒီထက် ပိုမိုဆန်းပြားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလိုချင်ပါရဲ့လို့ပြောသွားပါသေးတယ်။ ဇော်ကြီး လည်း ကျွန်တော်တို့အိမ်ကထွက်သွားရော ဦးရဲက ခပ်တိုးတိုးမှတ်ချက်ချတာက 'ဇော်ကြီးက မင်းချတာခံချင်နေပြီ' တဲ့။ အိုး...တွေးကြည့် မိတာနဲ့တင် ညီဘွားထိပ်က အရည်ကြည်တွေ စို့ထွက်လာတယ်ထင်ရပါ့။ ဦးရမျက်နှာကို အခုမှစေ့စေ့ကြည့်မိ 'ဟေး...ဦးရဲ ကျွန်တော့်ကို လျှိုထားတာပဲ၊ ဇော်ကြီးက ကစားဖော်ကစားဖက်စာရင်းထဲ ပါနေကျမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်ဟုတ်' လို့မေးလိုက်တယ်။ ဦးရဲက အားရပါးရ ရယ်မောရင်း 'မင်းကိုအားလုံးတော့ဘယ်ပြောမလဲကွ' တဲ့။ 'မင်းရဲ့ဒယ်ဒီကြီးအကြောင်းပိုပြီး သင်ယူတယ်လို့သဘောထား' ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ ပြော သေး။ ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဖြစ်ပဲ ငြိမ်နေမိပါတယ်။ လိင်တူကြိုက်နှစ်သက်သူများအကြောင်း သင်ယူဖို့ အများကြီးရှိသေးတာ။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်တော့်လိုကောင်ငယ်လေးက တစ်ခါတလေ စော်သွားချချင်ချသေးတာလေ။ ဦးရဲလွင် ကျွန်တော့်ပထွေးဟာ အကောင်းဆုံး သင်ကြားပြသသူ တစ်ယောက်ဖြစ်မှာပါ။
နွေရာသီကာလကျောင်းပိတ်ချိန်ပြီးဆုံးတော့မှာဆိုတော့ မကြာခင် တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကို စတက်ရတော့မှာပါ။ ကိုယ်တက်ရမယ့် ကျောင်းမှာ စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ဖို့ ကိုယ့်ဖာသာကျောင်းကိုရွေ့တော့ အဲဒီ့ကျောင်းရုံးခန်းမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အိမ်နီးနားခြင်း ထွန်းထွန်း နှင့် ပိုပြန်းအနီးကပ်ပေါင်းရတာပေါ့လေ ဦးရဲက သူ့အလုပ်နှင့်သူဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုလိုက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ ထွန်းထွန်းက ကျောင်းအပ်တဲ့ကိစ္စပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင် အကူအညီပေးပြီးသည့်တိုင် ကျွန်တော်က ကျောင်းကို လိုက်လိုက်သွားဖြစ်သလို သူကလည်း ကျွန်တော့်အိမ်ထိ လိုက်လည်တတ်ပါတယ်။ ဦးရဲက ကျွန်တော့်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အမေးစကားဆိုတော့ ထွန်းထွန်းနှင့်ကျွန်တော် တွဲဖြစ် နေတာ မကြာသေးပါဘူးလို့ဖြေရပါတယ်။ ထွန်းထွန်းက အားကိုးရတဲ့ အစ်ကိုကြီးပါပဲ။ သူ အထက်တန်းကျောင်းကာလတွေအကြောင်း ၊ တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ကာလတွေအကြောင်း ပြောပြတတ်တယ် ကျွန်တော်မေးသမျှ ဆွေးနွေးရင်းပေါ့။
'ညီ...ညီ့ကိုပေးဖို့လက်ဆောင်လေးတစ်ခု ရုံးခန်းမှာကျန်ခဲ့တယ် ပြန်သွားယူမလို့ လိုက်ခဲ့ပါလား?'
ကျောင်းထဲ ကျွန်တော်လိုက်သွားတော့ ကျောင်းဆောင်အစောင့်တွေကလွဲလို့ လူသူသိပ်မရှိတဲ့ အဆောက်အဦးတွေကိုဖြတ်သန်းကာ သူ့ရုံးခန်းငယ်လေးထဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ လက်ဆောင်ငယ်လေးအရှာထွက်ကြပါတယ်။ ကြည့်ရတာ အထားမှားသလားမသိ။ ကျွန်တော်ရိပ်မိ လာတာက ထွန်းထွန်း ကျွန်တော်နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပတ်သက်မှုမျိုး ဖြစ်ချင်ပြန်တယ်တူရဲ့။ ဒါပေမဲ့ အိမ်တွင်း အားကစားရုံမှာလေ့ကျင့် ကစားချိန်ရောက်ပြီမို့ အိမ်ကိုပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ သူလည်းလိုက်ကြည့်ချင်သတဲ့။
အိမ်ကိုရောက်တော့ ဦးရဲက ဘောင်းဘီတိုနှင့် bench presses အချို့ကို ကစားနေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း အ၀တ်လဲလှယ် သွေးပူလေ့ကျင့် ခန်းတွေလုပ်ကာ လက်မောင်းရှေ့သား၊ နောက်သား၊ ဆုံတွေနှင့် ပတ်သက်တာတွေကို စိတ်ဝင်တစားကစားပါတယ်။ ဦးရဲနှင့် ကျွန်တော် ကစားနေတာတွေကို ထွန်းထွန်း အရောင်တောက်မျက်ဝန်းတွေဖြင့် စိုက်ကြည့်နေတာများ ဦးရဲ၏ ငါသိပါတယ်ဆိုတဲ့ တုန့်ပြန်ကြည့်များ ကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ ကြားထဲက မနေတတ်သလို မျက်နှာများပင်ပူမိသေးတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်လောက် က ထွန်းထွန်းနှင့်ကျွန်တော်က အပြန်အလှန် blowjobs လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်လေ။ အခုလိုအချိန်မှာ ဦးရဲလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ ကို့ရို့ကား ယားနိုင်လှပါရဲ့။ အလေးတံမပင့်လိုက်လို့ နည်းနည်းယိုင်သွားရင် ထွန်းထွန်းက ၀င်ထိန်းပေးတာမျိုး၊ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော် dead lift လုပ်တဲ့အခါ သူက မသိမသာ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကိုဆွဲဆန့်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းကူညီချင်ယောင်ဆောင်ပြီး သူ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ သာယာနေတာက သူ့စိတ်တွေ အခုလို ကို့ရို့ကားယားနိုင်သော အခြေအနေမှာ တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားနေတာဖြစ် မယ်။
ဦးရဲက သောက်ဖို့ဖျော်ရည်အနည်းငယ်သွားယူချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံကို သိသိသာသာ ပွတ်သပ်ပြပြီး သူ့လက်ကိုဆွဲကိုင်ကာ ကိုင်တွယ်စေလိုက်ပါတယ်။ 'ကျွန်တော့်ကို တစ်ခါလောက် မှုပ်ပေးပါလား ကိုထွန်း' သူ့ကြည့်ရတာ ရေစိုနေတဲ့ငါးတစ်ကောင်နှင့် သူ့ကို ရိုက်နှက်လိုက်သလို မျက်လုံးတွေဝိုင်းသွားသလို မေးကြောတွေလှုပ်သွားကာ လန့်ဖြန့်သွားတာကို အရယ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းရင်း 'ဘာတွေပြော နေ တာလဲ ညီ ?' တဲ့ ထစ်ထစ်အအ မပီမသ စကားခွန်းတုန့်ပြန်တယ်။
ကျွန်တော် မတ်တပ်ရပ် ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲဖြုတ်ကာ ကြမ်းပြင်ပေါ် ပုံချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အောက်ခံဘောင်းဘီတိုကိုလျောချ မာ တောင်ပြီး လုပ်ငန်းစရန်အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ငပဲကို လက်နဲ့ဆွဲကိုင်ပြီး ခါရမ်းပြလိုက်ပါရော။ ဦးရဲပြန်ဝင်လာတာတောင် သတိမထားမိပါ ဘူး။ 'ထွန်းထွန်း ငါ့ကောင်လေးပစ္စည်းကို မှုတ်ပေးရင် မင်းပစ္စည်းကိုလည်း ငါမှုတ်ပေးမယ်လေ' ဦးရဲ ထွန်းထွန်းနားကပ်လာပြီး ပခုံးပေါ်လက် တင်လိုက်ကာ တောင်းဆိုလိုက်တော့ ထွန်းထွန်း စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားသလို shock လည်းဖြစ်သွားပုံပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်သိခဲ့ဖူးတဲ့လူအချို့ ကတော့ ကျွန်တော်ကသာ တောင်းဆိုလိုက်ရင် မကြာခင်သော အချိန်မှာ ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ထွန်းထွန်း သဘောတူတယ်လည်းမဟုတ် shock ဖြစ်လုနီးပါးခံစားပြီး ငြိမ်သက်ကာ အံ့အားသင့်နေပါလေ။ သူမှ မမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုး။ ဒါပေမဲ့ သူလည်း dick တစ်ချောင်းနှင့် ကစားခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ပဲဟာ။
ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်သား နည်းနည်းသွက်သွက်လက်လက် အ၀တ်တွေချွတ်လိုက်ကြကာ စက်ဝန်းငယ်တစ်ခုလို မတ်တပ်ရပ်လိုက် ကြပါတယ် တစ်ယောက်ငပဲတစ်ယောက်ကိုင် ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်ကြည့်ရင်းပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်ပထွေး ဦးရဲက စတင်လှုပ်ရှားပါတယ် ထွန်းထွန်းရှေ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်း သူ့ပါးစပ်ထဲ ငပဲကိုထည့်လိုက်ရင်း။ ထွန်းထွန်းငပဲကို ဦးရဲ ဘယ်လိုပြုစုလိုက်သည်မသိ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်စွာ နှုတ်ဖျားက အော်ညည်းသံထွက်လာပါရော။ ကျွန်တော်သည်လည်း ဦးရဲကို ကူညီပေးပုံက ထွန်းထွန်းလဒစ်ကို ဦးရဲစုတ် မှုပ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်က ရွှေဥတွေကို ငုံပြီးကစားသလေ။ သူလုံးဝမထိန်းနိုင်သောအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကို ဖယ်ရှားစေကာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရှေ့ကို သူဒူးထောက်လိုက်ပါတယ်။ အစပိုင်း သူကျွန်တော့်ငပဲကို မှုတ်လိုက် ဦးရဲ ဒစ်ကိုစုပ်လိုက် နောက်တော့ နှစ် ချောင်းလုံး သူ့ပါးစပ်ထဲသွင်းနိုင်သမျှသွင်းကာ ကစားပါတယ်။ မကြာသောအချိန်မှာတော့ သုံးယောက်သား စက်ဝိုင်းပုံလှဲလိုက်ကာ တစ် ယောက် ဒစ် တစ်ယောက် မှုတ်ပေးကြတာ ဘယ်သူက ဘယ်သူ အရင်ပန်းထုတ်ပြီး အဆုံးသတ်ကြတယ်မသိ ခဏတာငြိမ်သက်သွား ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရေအတူချိုးကြတော့လည်း ထွန်းထွန်းက ကျွန်တော့်ငပဲကို အားရပါးရကိုင်တွယ်ဆေးကြောပေးနေသေးတာပါ အရှက် မသည်းတော့ဘူးပေါ့။ ထွန်းထွန်းက ကျောင်းရုံးခန်းကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကိုခေါ်သွားကတည်းက ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို စုပ်မှုတ်ချင်နေတာ ဦးရဲက ဖွင့်ပေးတော့ အသင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့တဲ့။ သူကျွန်တော့်ကို အားရပါးရပြုံးကြည့်ကာ 'အိုကေ ညီဇော်၊ မင်း ကျောင်းတက်နေတုန်း မင်းငပဲကို ပြုစုပေးမယ့်သူ ဘယ်သူဆိုတာ သိပြီဟုတ်' ဟုပြောသေးတယ်။ဦးခေါင်းကို မသိမသာ ဦးရဲကိုဆတ်ပြ ရင်းပြောတာဆိုတော့ ဦးရဲကပြုံးလိုက်ရင်း 'မင်းသဘောပါ.... လိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်း'
'Yeah, ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်ကိုလာတဲ့အချိန်မှနော်' လို့ကျွန်တော်အတွန့်တက်လိုက်တော့ အားလုံးပွဲကျကုန်ပါတယ်။ 'အစ်ကို... .ကြိုးစားပါ့မယ်ခင်ဗျာ...'တဲ့ ထွန်းထွန်းကလည်းပြောပါတယ်။ ဦးရဲက ထွန်းထွန်းကို ထွေးဖက်ပြီး အနမ်းကြောရှည်စွာ နှုတ်ခမ်းခြင်း ထိကပ်သွားချိန်ထိ နှုတ်ဆက်နေတာ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် အဲဒီ ခဏတာလေးကို ကျွန်တော်မနာလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဖန်တီးချက် ကြောင့် သူတို့နှစ်ဦး ပိုပြီးနီးကပ်သွားမလား? ကျွန်တော် ဘာမှမဖြစ်သလို ဟန်ဆောင်ရင်း အိမ်ရှေ့ပေါက်ကိုဦးဆောင်ထွက် သွားလိုက် တယ်။ သူတို့တွေ ကျွန်တော် ဘယ်လိုခံစားရလဲ သတိမူမိမယ်မထင်။ ထွန်းထွန်း ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကထွက်ခွာသွားတော့ ဦးရဲက ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်ကာ 'သားငယ်, သူက မင်းနဲ့ကစားဖော်ကစားဖက် စာရင်းထဲပါလိမ့်မယ်လို့ ဦးရဲမထင်မိခဲ့ဘူး' တဲ့။ အဲဒါ ကျွန်တော်ပြန်ပြောဖို့အလှည့်ပေါ့။ 'အရာအားလုံး ဦးရဲကို ကျွန်တော်မပြောဘူးလေ။ အဲဒါ ဦးရဲ လေ့လာဖို့လိုသေးတဲ့ ကျွန်တော့်အ ကြောင်းပေါ့' ဦးရဲ ကျွန်တော့်အဖြေစကားကြားတော့ အားရပါးရပြုံးပါတယ်။
ကျွန်တော်နှင့် ဦးရဲ အိမ်တွင်း gym က ကိစ္စပြီးတော့ ရေမိုးချိုးသန့်စင်ကာ ဂိုထောင်ဘေးက ခရေပင်တန်းအောက် ခုံရှည်ပေါ်ထိုင်ဖြစ်ကြ ပါတယ်။နီယွန်မီးရောင်နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း သဘာဝကြယ်ရောင်တွေအောက်မှာ စကားတွေပြောဖြစ်ကြတာ။ အများစုကတော့ လိင်ကိစ္စ သဘာဝတွေအကြောင်းနှင့် မကြာခင်တက်ရောက်ရတော့မယ့် တက္ကသိုလ်မေဂျာတွေအကြောင်းပေါ့။ ကျွန်တော်လှဲလျောင်းနေရာ ခုံတန်း အနီးတိုးကပ်လှဲလျောင်းရင်း ကျွန်တော့်ငပဲကိုအသာဆွဲထုတ်ကာ ခပ်ဖြေးဖြေးနဲ့ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိအောင်ကောင်းတဲ့ blowjob ကို သူစတင်ပြု လုပ်ပေးတယ်။ 'ကောင်လေး....မင်းကိုအကူအညီတောင်းစရာရှိတယ်၊ ရမလား' ကျွတ်...ခင်ဗျား အရသာအလွန်ကောင်းတဲ့ ရေခဲမုန့်ကို စားနေတုန်းလွတ်ကျသွားရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? ဦးရဲကတော့လုပ်ပြီ။ 'မင်းကျောင်းသွားမတက်ခင် ဒီလိုမျိုးကိုမင်းဘော်ဒါ တွေထဲက တစ်ယောက်လောက်နဲ့ ကစားရအောင်လေ၊ မင်း ဦးရဲကိုပြောပြဖူးတဲ့စာရင်းထဲက ဘော်ဒါတစ်ပွေလောက်ဖြစ်ဖြစ်။ မင်း အသက်အရွယ် လောက်တစ်ယောက်နှင့် မင်းစီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဦးရဲအတွက် ပို good တာပေါ့ကွာ'
'သေချာတာပေါ့ ပြဿနာမရှိပါ' ခဏတော့ ကျွန်တော်တွေဝေသွားပြီးမှ သူ့တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်လျောလိုက်ပါတယ်။ 'ထူးထူးခြားခြား တစ်ယောက်လောက်?' အိုး...ဦးရဲဘယ်လိုများ လျှာနဲ့ကစားပြီး စုပ်မြိုနေတာပါလိမ့် လေထဲမျောလွင့်သွားမဲ့အတိုင်း။ 'အဲဒီလိုတော့မဟုတ် ပါဘူးကွာ။ ခပ်ဟော့ဟော့ကောင်လေး ပိုင်ပိုင် လောက်ဆိုရင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းလုပ်နိုင်သလိုလုပ်ပါ။ မင်းစီစဉ်တဲ့အတိုင်းပျော်ရမှာ ပေါ့။ မင်းသာ ဦးရဲနားမှာရှိနေခြင်းက အဓိက အချိန်ဖြစ်ရမယ် OK?
'အ...အာ...အ' ကျွန်တော် အဆုံးစွန်ခံစားချက်ဖြစ်ရပြန်တယ်။ဦးရဲပြုစုတာကို အတန်ကြာဆက်လက်ငြိမ်သက်နေပြီးမှ ဦးရဲ ဦးခေါင်းကို ထိန်းကိုင်ရင်း ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံကနေ ဖယ်ရှားစေပါတယ်။ 'ဒါပေမဲ့ ဦးရဲကိုပြန်တောင်းဆိုစရာရှိတယ်။ ဦးရဲနှင့် အတူတူ ဦးရဲပြောဖူးတဲ့ လူတွေထဲကတစ်ယောက်နှင့် ပတ်သက်ချင်တယ် ကျွန်တော်လည်းပဲ' ဦးရဲက နုညံ့စွာရယ်မောရင်း 'Ok, ထူးထူးခြားခြားတစ်ယောက် များ?' တဲ့။ 'ကျွန်တော့်ကိုပြောပြဖူးတဲ့ ချိုအေးဆိုတဲ့ကောင်လေးဆိုရင်ရော' လို့ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်တယ်။ ဦးရဲ သူ့မျက်နှာပေါ်က ပါးချိုင့်ပေါ် အောင် ပြုံးပြန်ရင်း 'Ok, အဲဒါက သိပ်အရေးမကြီးသေးပါဘူး။ အခုတော့မင်းရဲ့ နို့ရည်ပျစ်တွေ စားပါရစေဦး"
ကျွန်တော်....ကျွန်တော် စကားဆက်မဆိုဘဲ ငြိမ်လိုက်တယ်။
Alex Aung (6-3-11)
Posted by Alex Aung at 6:43 PM No comments:
ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ဘ၀အချစ်ရေးဟာ သာမန်လူသားတွေနှင့် မတူဘူးလို့သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒီလိုသတိထားမိချိန် အတောအတွင်း မှာ ကျွန်တော် စိတ်ခြောက်ခြားမှုတွေထဲကနေ ရှင်သန်နေရသလိုပါပဲ။ လာမယ့် အနာဂတ်ဟာ မှုန်ဝါးနေတယ်။ ရှေ့ဆက်ဖို့ ခရီးဟာ လည်း အရမ်းခက်ခဲလှပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်ဒုက္ခတွေများပြီး လွတ်မြောက်ဖို့ ခက်ခဲလှပါရဲ့။ ကျွန်တော့်စိတ်အတွင်းပိုင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ အချစ်ဟာ ပင်လယ်ရေအောက်အနက်ဆုံးအပိုင်းမှာရှိတဲ့ ရေလှိုင်းလုံးလိုပဲ အားသန်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ ရှိသမျှ ခွန်အားတွေနဲ့ အဲဒီလှိုင်းလုံးများကို ဖိနှိပ်ထားရတာလေ။ ဒီလှိုင်းလုံးများ ရေပြင်အထက်ကိုတက်မလာစေဖို့ ကာကွယ်ရတယ် လူတွေ မမြင်အောင်ပေါ့။ လူတွေရဲ့ ပြောင်လှောင်ချင်တဲ့ အကြည့်နှင့် အရယ်ကိုခံရမှာ စိုးရွံ့ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးလက်ထပ်တဲ့နည်းဖြင့် ရုံးထွက်နိုင် မယ်လို့ စဉ်းစားမိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်လက်လျော့လိုက်မိပါရဲ့။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုမှ မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအဖြစ်မျိုးဟာ မွေးရာပါလို့ဆိုတဲ့ အချစ်လား ဒါမှမဟုတ် ရက်တွေ လတွေ ကြာရှည်ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြစ်လာတဲ့ အချစ်တွေလား ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ အချစ်ဆိုတဲ့ သူဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်အတွင်းပိုင်းထိ အမြစ်တွယ်ခဲ့ရတယ်လို့ ခံစားရပါပြီ။ အသီးအပွင့်သာမဝေဆာပေမဲ့ သူ့အမြစ်ပင်စည်တွေက တဖြည်းဖြည်း ရှင်သန်အမြစ်တွယ်ကြီးထွားလာပါတယ်။
သည် နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်ဟာ အင်တာနက် ပင်လယ်အတွင်းမှာ လောကသစ် ဘ၀သစ်တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်လို့ ဆို ရမှာပါ။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို ၀လုံးဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။ 'အာ....ဒီလောကကြီးမှာ ကျွန်တော့်လိုအချစ်မျိုးတွေနှင့် သူငယ်ချင်းတွေ များပြားလှပါလား' သူတို့ဟာ ကျွန်တော်နှင့် အတူတူပဲ။ မူလမျက်နှာကို အားလုံးဖုံးကွယ်ထားကြတယ်လေ။ မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီး လူ့လောက မှာရှိတဲ့ သာမန်လူတွေနှင့် နေထိုင်နေရတယ်။ သာမန်လူတွေထက် ဘ၀လမ်းကြောင်းမှာ တစ်ခုပိုခက်ခဲရပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ ဘ၀မျိုးလည်း နေထိုင်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် သည်တွေ့ရှိချက်ကို အံ့သြ၀မ်းသာမိရပါရော။ ကျွန်တော် နောက်ထပ် အထီးကျန်တယ် လို့ မခံစားရတော့၊ မှီခိုတွယ်တာမှုမရှိခြင်းလည်း မခံစားရတော့ပါ။ အချိန်ရှိတာနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အင်တာနက်လောကကြီးထဲမှာ ၀င် ထွက်သွားလာနေတာပေါ့။ ဂေး(gay) သူငယ်ချင်းများနဲ့ ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ပြီး အထီးကျန်နေတဲ့ ကွက်လပ်လေးကို ပြည့်အောင်ဖြည့်မိခဲ့ ပါပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်မှု တစ်ခုရှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အလင်းတန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ် ကျွန်တော့်အထင်။ အလင်းတန်းထဲမှာ ပြုတ် ကျခဲ့သော်လည်း ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်လေ။
ကျွန်တော့်စိတ်ဟာ အရမ်းပျော်ရွှင်လာခဲ့ပါတယ်။ လူမှုဘ၀ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုသည် ကျွန်တော့်စိတ်အတွင်းမှာတော့ မမျှတဘူးလို့ ခံစားမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သည်စက်ဝိုင်းအတွင်းမှာ အမျိုးသားများဖြစ်ခြင်းကြောင့် အချင်းချင်း အားနာရှက်ကြောက်ခြင်းများမလိုပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိကြတယ်လို့ ခံစားရတာပေါ့။ လေတွေ မိုးတွေ တားမရသလို မြန်လှတဲ့ အချစ်မျိုးဟာ လူတွေရဲ့ နှာခေါင်းရှုံ့တာခံရ၊ လူတွေရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ထူးခြားနေတယ် ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဖျက် သမား၊ လူသတ်တရားခံတွေလို့ သူတို့က ယူဆကြတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော် ၀န်ခံပါတယ် ကျွန်တော်တို့ သည်စက်ဝန်းထဲမှာ (သူဋ္ဌေး၊ ဆင်းရဲသား၊ ရုပ်ရည်ချောတာ၊ ရုပ်ဆိုးတာပါတယ်၊ ပျော်ရွှင်တာ ၀မ်းနည်းတာ) ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် ကျောက်စရစ်တွေ စုစည်းနေထိုင်တဲ့ စက်ဝန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ လူ့လောကမှာလည်း ဒီလိုပဲ မဟုတ်လား? တခြားနည်းနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ လူတွေက သာ စိတ်အေးအေး ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်နှင့် ရှုထောင့်တစ်ခုကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်ဟာ နေရောင်အလင်းရောင် အောက်မှာ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။
'လောကကြီးမှာ ကျွန်တော်သာ စိတ်မှန်တဲ့လူဖြစ်ခဲ့လျှင် အားလုံးဟာ စိတ္တဇအရူးမဖြစ်ကုန်ဘူးလား' ဟု အများက စိတ္တဇအရူးဟု အပြော ခံရ သူကဖြေကြားလိုက်ပုံတစ်ခုကို ဖတ်ရှုလိုက်မိချိန်တုန်းကတော့ ကျွန်တော် အရမ်းရယ်မောချင်ခဲ့ပေမဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ သူ့ကို အရမ်း ချီးကျူးလေးစားမိပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲလို့ မရဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ဘယ်လိုမှ အား လည်းမရှိခဲ့ဘူး။ မီးတောင်လို ဟုန်းဟုန်းတောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သည်အချစ်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့စေရာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? လူတွေကသာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချစ်မျိုးကို ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် အာဒမ်နဲ့ ဧ၀ စားခဲ့တဲ့ သစ်သီးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပြင်း ဆုံး ကာမဆေးဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်း အသုံးမ၀င်တော့ချေ။ သူတို့သည်လည်း သားစဉ်မြေးဆက်များ မွေးဖွား၍ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံ စေခဲ့သည်လော။ ဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလျှင်လည်း ကျွန်တော်တို့သည်လူသားတွေပါ။ လူတိုင်းတွင် ရည်မှန်းချက်ရှိကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွင်လည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချစ်မျိုးကိုလိုချင်ကြတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဦးတည်ချက်တစ်ခုတည်းသာ ကွဲပြားခဲ့တာပါ။ လူတိုင်းသည် မိမိနေထိုင်တတ်သော ဘ၀နေထိုင်မှုဟန်ပန် ကိုယ်စီရှိကြသည်။ ဂေးသည်လည်း ရောဂါမဟုတ်ပါ။
လူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ဘာကြောင့်များ နားမလည်ကြတာလဲ ကျွန်တော်တို့က ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို မထိခိုက်စေချင်ဘူး။ ထို့အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း မထိခိုက်စေခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ကျွန်တော်တို့ကို အမြဲထိခိုက်အောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ပဲ နေထိုင်ရမှာလား? အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ သည်အချစ်မျိုးမှာ လျှောက်လှမ်းလာရသော ဘ၀ခရီး တလျှောက်လုံးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ရတော့မည်ဟု ခံစားမိရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ သူ (gay love) ဘာပဲဖြစ နေဖြစ်နေ လူတွေရဲ့ ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်း ဂရုမစိုက်တော့ပါ။ စိတ်အတွင်း၌ သိုသိမ်းထားသော စိတ်ဝေဒနာ များကို ဖွင့်အန် ပြောချလိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် အရမ်းပေါ့ပါးလွတ်လပ်သွားတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ထိုနည်းအတူ ကျွန်တော့်စိတ်အတွင်း၌ ရှိသော စကားကိုလည်း ပြောထွက်ချင်ပါတယ်။ လူတွေက ဂေးတွေကို မှားယွင်းတဲ့ထင်မြင်ချက်နှင့် အထင် သေးသော အကြည့်မျိုးတို့နှင့် ထပ်မဆက်ဆံစေရန်ပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လူတွေရဲ့ ပွစိပွစိပြောဆိုမှုတွေဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်စေနိုင်သည်လေ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ နေရာတိုင်းလုပ်ငန်း ခွင်တိုင်းမှာ ဂေးတွေရှိကြတာပဲ။ သူတို့တွေက ကိုယ့်နေရာအတွင်းရှိ တာဝန်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြတယ်။ သူ တို့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ဟာ သူတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ ချီးကြူးမှုကို ခံကြရတတ်တယ်။ အကယ်၍သာ သူသည် သူတောင်းစားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်း သူတောင်းစားအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင်း၌အတော်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဂေးတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးဆပ်မှုသည် သာမန်လူထက်မသေးငယ်ပါ။ သူတို့သည်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု ခရီးတွင် သူတို့သည်လည်း မပါမဖြစ် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်!
ကျွန်တော် အချစ်ဆိုသော အရာကို ရှာဖွေနေခဲ့သည်မှာ ကြာလှပါပြီ။ တစ်ခါက ရယ်ဖူး၊ ငိုဖူး၊ ရင်နာခဲ့ဖူး။ ဖူးစာကုန်ခဲ့ပြီဟု ထင်ရသည်။ ကျွန်တော် သေချာသိခဲ့ပါတယ် အကယ်၍ဂေးတစ်ယောက်က သာမန်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချစ်မိခဲ့မယ်ဆိုလျှင် အဲဒီကိစ္စဟာ အရမ်း ရင်နာဖို့ ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဂေးတစ်စုသည် ညစ်ပတ်သည်ဟု ခင်ဗျားကို ထင်ချင်လျင်ထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲသည့်ကိစ္စက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပုံမှန်ဘ၀ကိုလိုချင်ကြတာပဲ ပုံမှန်လမ်းကိုလျှောက်ချင်ကြတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ခံစားချက်ဘယ်လိုမှ မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ အဲဒါ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ အမှားလား? ကျွန်တော်တို့ ဂေးသည်လည်း သွေးနှင့်သားနှင့်ပါ။ အချစ်နှင့် သံယောဇဉ်နှင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည်လည်း လူ တစ်ယောက်ကို ချစ်ခွင့်ရဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ခွင့်ဆုံးရှုံးရမှာ လား?
ဦးခေါင်းထက်မှာ ဆံပင်ဖြူလေးတွေရှိနေသော မိဘကိုကြည့်၍ ပျော်ရွှင်နေသော ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ၌ နည်းနည်းတော့ ၀မ်းနည်းမှုကိုခံစား ရလာပါတယ်။ အချိန်ရဲ့စွမ်းအားကို အရမ်းအံသြမိပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဘာမှကို တားဆီးလို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာတစ်ခု ကတော့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်ပြီး မိဘကို ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်သင့်လုပ် ထိုက်တာကိုပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စမှာတော့ ကျွန်တော် ဒီ ဂေးဘ၀ကို အတည်ပြုရွေးချယ်လိုက်ခဲ့ပြီဆိုတာကြောင့် ပြောင်းလဲဖို့ စိတ်ကူးလည်းမရှိဖဲ့တော့ပါဘူး။ ဒီတစ်ချက်မှာတော့ ကျွန်တော့်မိဘတွေကို ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်တော့်ကို သူတို့နားလည်ပေးနိုင်မယ် လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့လည်း ကျွန်တော့်ကိုချစ်လို့ပါပဲ။ 'မင်းကိုချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ မင်းရဲ့ သာယာ ပျော်ရွှင်မှု တစ်ခုအတွက် သူ့အတ္တကို နည်းနည်းလျော့ပြီး လိုက်လျောပေးတတ်မယ်ဆိုရင် မင်းရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အချစ်ရေးကို လေးစား ပေးလိုက်ပါမယ်' လို့ ဖေဖေတို့ကပြောထားပါတယ်။
လိင်ကွဲအချစ်ဖြစ်စေ၊ လိင်တူအချစ်ဖြစ်စေ အချစ်ဆိုတာ အရမ်းမြင့်မားတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုပါပဲ။ အားလုံးထဲမှ အနည်းငယ်သော မွေးရာပါ ကံကြမ္မာနှင့် ဖူးစာရှင်ဖက်တို့သည်သာ သူတို့၏ အချစ်ကို အပြည့်အ၀ခံစားရတတ်ကြသည်။ ကျန်တဲ့ အများစုသည် အချစ်ကိုအငှားပြု၍ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နာကျင်အောင်သာပြုလုပ်နေကြပါသည်။ ကိုယ် မင်းကိုချစ်တယ်၊ ကိုယ့်ကို မင်းပိုချစ်လာအောင်ဆိုတာမျိုး ၊ ငါမင်းကို အရာရာပေးဆပ်ပါတယ်၊ မင်းလေးဆီက ပိုမိုသော ပေးဆပ်မှုကို ပြန်ပေးခိုင်းစေချင်တာမျိုးတွေပဲမဟုတ်လား။ ကျွန်တော် တစ်ခါ က ဂေးအချစ်ကို ရိုးရိုးသားသားချစ်ခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးအမြတ်နှင့် မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေး စသည့်အချစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သောအရာများ၏ နှောက်ယှက်မှုကို မခံစားခဲ့ရပေ။ နောက်တော့ တွေ့တာများတော့လည်း ရိုးသွားခဲ့တာပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲလေ အချစ်အမုန်း ပျော်ရွှင်မှုနာကျင်မှု တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုနှင့် တောင့်တမှု အားလုံးသည် အတူတူပါပဲ။ လိင်တူအချစ်သည် လိင်ကွဲအချစ်ထက် အဆင့်လည်း မမြင့်ပါ အဆင့်နိမ့်သည်လည်း မရှိပါဘူး။ မယား သားသမီးကို စွန့်သည့် လိင်ကွဲအချစ်ရှိသလို၊ လူရှုပ်လူပွေ လိင်တူအချစ်မျိုးလည်း ရှိကြ သည်။လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကြားတွင် စာပေစာတမ်းနှင့် ပတ်သက်မှုကိုပြသကြသည်လော၊ ပတ်သက်မှုအပိုင်းသည်လည်း ဥစ္စာ အာဏာ များ မဟုတ်ဘူးလား တစ်ခုတည်းသော အချစ်သည်ကား တစ်စုံတစ်ရာမှ ထိန်းချုပ်မရပေ။ လူတွေကပြောကြပါတယ် သတိရခြင်းသည် စိတ်ဒုက္ခတစ်ခုပဲတဲ့။ ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ အဲဒါ တစ်ဖက်သတ် သတိရခြင်းဖြစ်သည်လို့ပဲ။ လူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သတိရခြင်းသည် ပျားရည်လိုချိုမြိန်သည်ဟု ခံစားရပါတယ်။ ခါးသည်းသည်ဟု နည်းနည်းလေးမှ မခံစားရပါဘူး။ အဲ့ဒါ ကြောင့် ကျွန်တော် ဒီသူငယ်ချင်းတွေအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပါတယ်၊ ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့လူ ကိုယ့်ကိုပြန်ချစ်နေတဲ့ လူကိုသွား ချစ်ပါ။ ဒီလိုမှသာ ချစ်ခြင်းနှင့်ပြန်အချစ်ခံရတဲ့ ခံစားမှုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
သစ္စာမဲ့တဲ့လောကကြီးထဲမှာ ကျွန်တော့်လို သနားစရာကောင်းတဲ့လူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲဆိုတာ ကျွန်တော် မသိခဲ့ပါဘူး။ ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို ချစ်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်။ချစ်ခြင်းကို လူတွေနဲ့ပြောလို့မရ ခါးသီးတဲ့ခံစားမှုကိုလည်း ပြောလို့မရ၊ နာကျင်သောခံစားမှုကိုလည်း ပြောလို့မရ၊ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်တို့ရဲ့ စစ်ဆင်မှုသည် ဆီပူအိုးထဲနှင့် အလားတူခံစားရခက်လှပါသည်။ တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ် တစ်လှည့်ပြီးတစ်လှည့် ဖြူစင်လှသော ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကို တိုက်ခိုက်နေပါသည်။ ဒီလိုမှီခိုရာမဲ့အချစ်မျိုး၊ ထုံကျဉ်မှု ကင်းမဲ့အချစ်မျိုး၊ ကောင်လေး၏ စိတ်ထဲမှာ ရှိနေစေခဲ့ပြီး လူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုဟု သတ်မှတ်ကြသည်မှာ အလွန်ရက်စက်ခြင်းနှင့် သစ္စာသွေဖည်ခြင်းမဟုတ်လား.....။
Alex Aung (8-3-2011)
စာကြွင်း ။ ။ ကျွန်တော် စိတ်ထဲမှာ ခံစားမှုတစ်ခုရှိတိုင်း ရေးချတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်မှတ်စုထဲက အကြောင်းအရာများကို စာတစ်ပုဒ်အသွင် ရေးထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေဖို့များပါသည်။ အရေးအသားကို အချောမဆင် အသွင်မပြောင်းဘဲ မှတ်စုထဲက အတိုင်း စီကာစဉ်ကာရေးလိုက်ပါသည်။
Posted by Alex Aung at 7:54 PM2comments:
Colours Rainbow - Health
ယောက်ျားလေးအဖြစ်မှ မိန်းကလေး အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနေထိုင်သော TG (Transgender) များအတွက် HIV နှင့် ကာလသား ရောဂါများမှာ အလွန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ TG များမှာ HIV ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ အခြားသော အုပ်စုများထက် ပိုမိုများပြား နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကို ပြနေသလဲဆိုရင် TG တော်တော်များများမှာ HIV ရောဂါပိုး ကူးစက် ခံထားရတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ TG အမျိုးသမီးများအတွက် ရွေးချယ်မှု မဟုတ်သလို TG များဟာ မကောင်းတဲ့လူတွေ မို့လို့ အပြစ်ပေးခံရတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ TG များ နေ့စဉ် တွေ့ကြုံနေရတဲ့ နှိမ်ချ ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံရခြင်းများဟာလဲ TG များအတွက် အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံရခြင်းများကြောင့် TG များဟာ မိမိတတ်ကျွမ်း သင်ယူထားသော ပညာရပ်များကို အသုံးမချနိုင်ပဲ သင့်တော်သော အလုပ်အကိုင်များ မရရှိတဲ့အတွက် TG များဟာ လိင်လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင် ကြရတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး TG များအတွက် လုံလောက်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ဌာနများမှာ TG များအား နှိမ်ချ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ လိုအပ်သော ဆေးဝါးကုသမှုများ မရရှိခြင်းနဲ့ အနိုင်ကျင့် အဓမ္မပြုကျင့် ခံရမှုများဟာ TG များအတွက် HIV ကူးစက်နိုင်သော အန္တရာယ်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
TG များကြားမှာ HIV ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ဘယ်လောက် ရှိနေသလဲဆိုတာ အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုံကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ဒုံးကို ဘယ်လိုအသုံးပြု ရမလဲ။
သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက်ကို ကြည့်ပါ။
ကွန်ဒုံးကို ဖေါက်စဉ်မှာ မိမိလက်သည်းများနဲ့ ခြစ်မိခြင်း မရှိစေရန် ဂရုစိုက်ပါ။
မိမိအသုံးပြုမည့် ကွန်ဒုံးကို အပူဒဏ် (သို့) ဖိအားများကြောင့် ပျက်ဆီးနေခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
ကွန်ဒုံး အထိပ်ပိုင်းအား သုတ်ရည် ထွက်နိုင်ရန်အတွက် နေရာချန်ထားပါ။
ကွန်ဒုံးအား ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါ အဆုံးထိရောက်အောင် ဆွဲချပါ။
ဆီနှင့်အခြားသော ဓါတုပစ္စည်းများကို အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားသော ချောဆီများကို မသုံးရပါ။ Vaseline ဆီ၊ အုန်းဆီနှင့် လိုးရှင်းအဆီများက ကွန်ဒုံးများအား ပေါက်ပြဲစေတတ်ပါတယ်။ ရေကို အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားသော ချောဆီများကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
၄င်းချောဆီများကလဲ လိင်ဆက်ဆံချိန် ကြာလာသောအခါ ခြောက်သွေ့ပြီး ပေါက်ပြဲသွားတတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ခြောက်သွေ့သွားပါက ရေ (သို့) တံတွေးတို့ဖြင့် ပြန်ပြီးစိုစွတ်လာအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေကို အခြေခံပြီး ထုတ်ထားတဲ့ ချောဆီများ မရှိချိန် လိင်ဆက်ဆံလိုပါက တံတွေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
တံတွေးအသုံးပြုရာမှာ သတိပြုစရာ အရာတစ်ခုက ထိုးသွင်းဆက်ဆံခံမည့်သူ (အလုပ်ခံမည့်သူ)သည် မိမိတံတွေးကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ အဖေါ် (လုပ်မည့်သူ)၏ တံတွေးကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
ကွန်ဒုံးသုံးတယ်ဆိုတာ ကွန်ဒုံးရှိမှ သုံးနိုင်မှာပါ။ လိင်ဆက်ဆံမည့် အချိန်မှာ ကွန်ဒုံးမရှိရင် ကွန်ဒုံးသုံးနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိနဲ့အတူ ကွန်ဒုံးကို အမြဲဆောင်ထား သင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ လိင်ဆက်ဆံခါနီး ကွန်ဒုံး မရှိပါက ထိုးသွင်းဆက်ဆံခြင်း မဟုတ်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံနည်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ဒုံး မရှိတဲ့အခါမှာ ပေါင်ကြား၊ ဂျိုင်းကြား (သို့) ရင်သားကြား (ရင်သားရှိသူများ) များသို့ထည့်ပြီး ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ အချို့ နေရာများမှာတော့ အမျိုးသမီးသုံး ကွန်သုံးများကို အသုံးပြု ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးသုံး ကွန်ဒုံးများဟာ ဘယ်အချောဆီနဲ့ မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လိင်တံ ပတ်ပတ်လည် ကျပ်မနေပါ။ ဒါကြောင့် ထိုးသွင်း ဆက်ဆံသူအတွက် လွတ်လပ်တဲ့ အရသာ ရရှိစေပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင် တခါတခါ အသံထွက် တတ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးသုံး ကွန်ဒုံးတွေဟာ ရေကို အခြေခံထားတဲ့ ချောဆီ အပါအ၀င် ဆီကို အခြေခံထားတဲ့ ဆီများကိုပါ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
ကြီးတဲ့အတွက် မ၀င်နိုင်ဘူးလို့ အစပိုင်းမှာ ထင်တတ်ကြပါတယ်။
ထိုးသွင်း ခံရမယ့်သူမှာ ထည့်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိအဖေါ်ကို ကွန်ဒုံးသုံးဖို့ အတွက် ညှိနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အမျိုးသားသုံး ကွန်ဒုံးထက် ဈေးပိုကြီး တတ်ပါတယ်။
အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူ၍ မရနိုင်၊ မတွေ့နိုင်ပါ။
နောက်တစ်ချက် သတိထား ရမှာက အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရက် (သို့) အခြား မူးယစ်စေတတ်သော အရာများကို သုံးစွဲထားမိပါက မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မချနိုင်တော့ပါဘူး။ ဥပမာ - ကွန်ဒုံးမပါပဲ လိင်ဆက်ဆံတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ တဒင်္ဂ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် မိမိတို့ရဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို အဆုံးရှုံး မခံသင့်ပါဘူး။ မိမိရော မိမိအဖေါ် အတွက်ပါ အန္တရာယ် ကင်းစေရန်အတွက် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ယောက်ျားလေး တော်တော်များများဟာ ကွန်ဒုံးသုံးရင် ဇိမ်မရှိဘူး၊ လိင်အင်္ဂါ မမာနိုင်ဘူးနဲ့ သူတို့အတွက် စွဲဆောင်မှု မရှိဘူး စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ကွန်ဒုံးကို မသုံးချင်ကြပါဘူး။ ကွန်ဒုံးကို မြန်မြန်စွပ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလို လေ့ကျင့်ထားခြင်း အားဖြင့် ကွန်ဒုံးသုံးခြင်း စတဲ့ အလေ့အထကို ရလာပါလိမ့်မယ်။
စကားနည်းနည်းပြောပြီး ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မှု များများလုပ်ပါ။ ဆိုလိုတာက မိမိနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမယ့် သူကို သူ့လိင်တံ ပျော့မသွားစေရန်အတွက် ဆုပ်နယ်ခြင်းများ၊ ပွတ်သပ်ခြင်းများ စတာတွေကို ပြုလုပ်ပေးသင့် ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က သူတို့ကို ပါးစပ်နဲ့ ဆက်ဆံစဉ်အတွင်း ကွန်ဒုံးကို စွပ်ပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို မိမိပါးစပ်နဲ့ ဆက်ဆံပေးနေစဉ်မှာ ကွန်ဒုံးစွပ်ပေးခြင်းဖြင့် မိမိနဲ့ ဆက်ဆံမယ့် သူရဲ့ လိင်အင်္ဂါက ပျော့သွားနိုင်စေရန် အကြောင်းမရှိပါဘူး။ သူတို့ လိင်တံ ပျော့မသွားဘူးဆိုရင် သူတို့လဲ ကွန်ဒုံးသုံးဖို့အတွက် ငြင်းဆန်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်လို့ မိမိတို့ လိင်ဆက်ဆံတော့မယ့် အချိန်မှာ ကွန်ဒုံးက အလွယ်တကူ မရနိုင်တော့ရင် အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်များကို ပြုလုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်။
ဖန်တီးမှုများ ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဒီတကြိမ်မှာ ကွန်ဒုံး မရှိတဲ့အတွက် ဆက်ဆံမှုများ မလုပ်နိုင်ရင် နောက်တစ်ကြိမ်ကျမှ လုပ်ရန်အတွက် ပြန်ချိန်းပါ။ မိမိအဖေါ်ကို စကားများ ပြောခြင်း၊ နှိပ်နယ်ပေးခြင်း တို့ဖြင့် ၄င်းတို့ရဲ့ ဆန္ဒကို ပြေလျော့သွားအောင် လုပ်ပေးပါ။
ထိုးသွင်း ဆက်ဆံခြင်း မဟုတ်တဲ့ နည်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - လက်နဲ့ လိင်စိတ် ဖြေဖျောက်ပေးတာတို့၊ ရင်သားကြား၊ ပေါင်ကြားတို့နဲ့ ဆက်ဆံပေးတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ပါးစပ်နဲ့ ပြီးအောင် ဆက်ဆံ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပါးစပ်နဲ့ ဆက်ဆံခါနီးမှာ မိမိခံတွင်း သန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ အရင်စစ်ဆေး သင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သွားဖုံးများက ပွန်းပဲ့လွယ်တာကြောင့် ကွမ်းယာကဲ့သို့သော မာကျော၊ ပေါက်ပြဲလွယ်သော အရာများကို မစားသင့်ပါဘူး။ ထို့အပြင် ပါးစပ်နှင့် ဆက်ဆံခါနီးနှင့် ဆက်ဆံပြီးချိန်များတွင် သွားတိုက်ခြင်းများကိုလဲ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ခံတွင်းသန့်ရှင်း ချင်ပါက ခံတွင်းသန့်ရှင်းရည် များနဲ့ ပလုပ်ကျင်း နိုင်ပါတယ်။
ကွန်ဒုံးဟာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါများကို ကာကွယ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းကြောင့် လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ကူးစက်နိုင်တဲ့ HIV ၊ ဂနို၊ ဆစ်ဖလစ်၊ ခလာမေးဒီးယား၊ ကြွက်နို့၊ ရေယုန်နဲ့ အခြားရောဂါမှ ကူးစက်ခံရခြင်း (သို့) မိမိထံမှ အခြားသူ တစ်ဦးထံသို့ ကူးစက်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
မိမိမှာ HIV ပိုးနဲ့ အခြားလိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင်သော ရောဂါများ ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းမှာလဲ ကူးစက်မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်တဲ့ နည်းလမ်းများမှာ အရေးကြီးတဲ့ နေရာ တစ်နေရာက ပါဝင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ TG များဟာ မိမိတို့ရဲ့ အရင်က အတွေ့အကြုံ ဆိုးများကြောင့် ဆေးရုံဆေးခန်းများကို မသွားချင် ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် TG များနဲ့ ၄င်းတို့ရဲ့ အဖေါ်များမှာ HIV ပိုး ရှိ မရှိ သိနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက သွေးစစ်ဆေးခြင်းပါပဲ။
နေရာ တော်တော်များများမှာ မိမိနာမည်ကို ပြောစရာမလိုပဲ HIV ပိုးကို အခမဲ့ စစ်ဆေးပေးနေ ကြပါတယ်။ အချို့ နေရာများမှာ နှစ်သိမ့် ဆွေးနွေးပေးတဲ့ သူများရှိပြီး ၄င်းတို့နဲ့ HIV ၊ ကာလသားရောဂါများ အကြောင်းကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ၄င်းဆွေးနွေးသူများက HIV နဲ့ ကာလာသား ရောဂါများ မကူးစက်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင် ရမယ်ဆိုတာ များကိုပါ ဆွေးနွေးပေး ပါတယ်။
မိမိမှာ HIV ပိုး ရှိခဲ့ရင်လဲ ဘယ်လို နေထိုင် စားသောက်ရမယ် ဆိုတာတွေကို ရှင်းပြပေးပါတယ်။ HIV ပိုး ကူးစက်ခံရခြင်းဟာ သေဒဏ်ကျခံရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ်မှာ ခေတ်မှီ ဆေးဝါးများစွာ ပေါ်ပေါက် နေပါပြီ။
နေရာ တော်တော်များများမှာ ကုသမှုတွေဟာ အခမဲ့ (သို့) အလွန်သက်သာသော ဈေးနှုန်းများနဲ့ ဆေးကုသမှုများ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိ သွေးစစ်ဆေးတဲ့ အခါမှာ မိမိမှာ HIV ပိုး ကူးစက်ခံရမလား ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ ကြောက်ရွံ့တတ်ကြ ပါတယ်။ အကယ်၍ မိမိမှာ HIV ပိုးစစ်ဆေးပြီးလို့ မရှိဘူးလို့ အဖြေထွက်လာရင် နောက်တစ်ခါ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ မရှိအောင် လိင်ဆက်ဆံတိုင်း လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ လိင်ဆက်ဆံနည်းများနဲ့ ဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်း များကြောင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေနဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ တွေကိုလည်း လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ဆီးသွားရင် ဆီးပူခြင်းနဲ့ နာကျင်ခြင်း။
လိင်တံ၊ စအို နဲ့ မိန်းမအင်္ဂါများမှ ပြည်များထွက်ခြင်း။
လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက် တင်ပါးနေရာများ၊ ပေါင်ကြားများနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တ၀ိုက် နာကျင်ခြင်းနဲ့ ယားယံခြင်း။
လိင်တံ၊ ဝှေးစေ့၊ စအို၊ မိန်းမအင်္ဂါ နှင့် လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက် အနာများ၊ ကြွက်နို့များ၊ အဖုများနဲ့ ယောင်ယံခြင်းများ။
လက်ဖ၀ါး၊ ခြေဖ၀ါးများတွင် အနီကွက် (အင်ပြင်) များထခြင်း။
မျက်လုံးနှင့် အသားများ ၀ါလာခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဖေါ်ပြပါ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုကိုတွေ့ရင် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်များနဲ့ သွားရောက် ဆွေးနွေး ပြသသင့်ပါတယ်။ မိမိဘာသာ မကုသ သင့်ပါဘူး။ ဒါကတော့ TG များနဲ့ ၄င်းတို့ရဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အချက်များကို ဖေါ်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ HIV ပိုးရှိလာရင် ဘယ်လို ကျန်းမာအောင် နေထိုင်မလဲ၊ HIV ပိုးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သောက်ရတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ ဟော်မုန်းဆေးများရဲ့ ဆက်စပ်မှုများ အကြောင်းကို ဖေါ်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးဖတ်ပြီး ဗဟုသုတ (သို့) သတိပေးခြင်း တစ်ခုခု ဖြစ်သွားတယ် ဆိုရင်ပဲ ကျနော် ရေးရကြိုး နပ်ပါတယ်ဗျာ။
နေဦး @ Alvis
မှတ်ချက် ။ ယခုဆောင်းပါးမှ အချက်အလက်များအား APNSW မှ ထုတ်ဝေသော TG Health Book နှင့် UNESCO မှထုတ်ဝေသော MSM Peer Manual တို့အား မှီငြမ်းထားပါသည်။
Posted by Alex Aung at 9:17 AM No comments: